Tokony hankalazaina ao Halacha ve ny fifadian-kanina ho fahatsiarovana ny Fandripahana Tambabe? (Tsanganana 4) - Raby Michael Avraham
Tokony hankalazaina ao Halacha ve ny fifadian-kanina ho fahatsiarovana ny Fandripahana Tambabe? (Tsanganana faha-4)
18 hevitra	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Isan-taona dia mipoitra ny fanontaniana hoe nahoana ny olon-kendry no tsy mametraka andro fifadian-kanina na andro fahatsiarovana ho fahatsiarovana ny Holocaust. Raha nifady hanina ho fahatsiarovana ny namonoana an’i Gedalia Ben Ahikama izy ireo na ny vaky ny manda tamin’ny nanaovany fahirano an’i Jerosalema, dia azo inoana fa ny andro toy izany dia tokony hatsangana ho fahatsiarovana ny Fandripahana Tambabe, izay fara faharatsiny, tsy fahita firy sy nahatsiravina. ho antsika lohahevitra sy manohina kokoa. Matetika ny valiny dia mitodika amin'ny fanontaniana momba ny fahefana sy ny fahefana halakhic. Ny sasany dia mifikitra amin'ny hoe tsy manana andrim-panjakana mahafeno fepetra (Sanhedrin) izay afaka mametraka andro mamehy ho an'i Klal Israel isika. Ny hafa indray milaza izany amin'ny fahakelezantsika (ny fitotongan'ireo taranaka tadidy tsara). Ireo fialan-tsiny ireo dia toa manjavozavo indrindra. Raha azo apetraka ny Purim Frankfurt na Casablanca, ary raha azo voarara ny legume na smartphone na fahitalavitra, dia azo inoana fa misy ny fahefana ary ampy ny fahefana halakhic hamokatra lalàna vaovao rehefa ilaina izany.
Maro no mahita izany ho Yvonne halachic, ary heveriko fa misy ny rariny ara-drariny ao. Misy tokoa ny fisalasalana eto amin'ny vaovao, sao voadika ny famaritana. Tahotra fanavaozana na Zionisma (amin'ny dingana manaraka dia hanomboka hankalaza ny Andron'ny Fahaleovantena ao Israely izy ireo). Saingy te-hanolotra fomba fijery malalaka sy hafa aho eto, momba ity fanontaniana ity.
Nandeha ho an'ny imperialisma aho
Singa iray tena ilaina amin'ny fanabeazana ara-pinoana ho antsika rehetra ny halakhah manontolo. Heverina fa mandrakotra ny zava-drehetra, hajaina ny tany manontolo ary misy toerana banga. Ny zava-drehetra, ary indrindra ny zava-tsarobidy indrindra, dia tokony handalo amin'ny reactor fitsapana halachic ary anisan'izany koa. Ny lafiny iray amin'ny vola madinika dia ny hoe tsy misy sanda sarobidy na asa izay tsy miditra amin'ny halakhah ary tafiditra ao anatin'izany.
Ohatra, maro no mitady ny fanambarana ara-tsosialy sy ara-toekarena momba ny halakhah. Moa ve halakhah ara-tsosialy demokratika, kapitalista (soso-kevitra: ity no valiny akaiky indrindra) sa kominista? Ny Morning News dia namoaka lahatsoratra iray izay milaza fatratra ny atao hoe halakhah sosialista, manohana ny fitsinjarana ny rariny, ny kapitalista, ny kominista sy ny toy izany.
Ny fiheverana mahazatra amin'ireo toerana rehetra ireo dia ny halakhah dia azo antoka fa anisan'ireo rehetra ireo. Tiako lavina eto izany fiheverana mahazatra izany, ary ataovy amin'ny ambaratonga roa izany: a. Heveriko fa tsy azo atao ny maka ny halakhah fanambarana tsy misy fisalasalana momba ireo olana ireo sy ny mitovy aminy. B. Tsy ilaina koa ny manao izany. Tsy misy antony hananan'i Halacha fanambarana toy izany. Hiezaka hanazava bebe kokoa aho izao.
A. Manana fanambarana ideolojika mazava ve ny halakhah?
Halacha dia fitambarana teny maro izay nivoatra nandritra ny taranaka maro, tany amin'ny toerana maro sy tao anatin'ny toe-javatra samihafa ary nataon'ny olona samihafa. Tsy misy firindrana foana ao amin'ny fiaramanidina meta-halachic. Ho ohatra nindramina, dia horaisintsika ny didim-pitsaran’i Maimonides momba ny toriteny. Na dia mihevitra aza izy ireo fa manana fiovaovan'ny halakhic, dia mety tsy mitazona ny fitovian'ny meta-halakhic izy ireo. Araka ny fantatra dia misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny Beit Midrash an'i Rabbi Akiva sy Rabbi Ismael momba ny fomba fitakiana ny Torah (ho an'i Rish - ankapobeny sy manokana, ary ho an'ny RA - maro sy vitsy an'isa. Jereo ny Shavuot XNUMXa sy ny mifanitsy aminy. ). Misy olana maromaro mitondra fiantraikany halakhic samihafa amin'ity resabe meta-halakhic ity. Maimonides no manapaka amin'ny halakhah amin'ny sasany amin'ireo olana ireo, ary araka ny efa nasehoko tany an-kafa dia hita fa indraindray izy dia manapaka amin'ny maha-halakhic izay miantehitra amin'ny toriteny ankapobe sy manokana ary indraindray izy dia manapaka amin'ny maha-fihevitra miantehitra amin'ny fahamaroana sy ny vitsy an'isa. Tsy mitazona ny fitovian'ny meta-halakhic izany.
Heveriko fa ny halakhah amin'ny ankapobeny dia mety manana fiovaovan'ny halakhic (ary ity koa dia fanambarana somary tafahoatra raha ny hevitro), saingy toa tsy misy meta-halakhic na ideolojika izy io, izany hoe maneho filaminana, kominista, kapitalista na hafa. socio-economic sub-theme. Ny loharano samihafa dia mitondra antsika amin'ny tsoa-kevitra samihafa, tsy izy rehetra no mamatotra, tsy izy rehetra no mihatra amin'ny toe-javatra rehetra, samy hafa ny fandikana ny maro amin'izy ireo, noho izany dia tsy azo atao ny manatsoaka hevitra avy amin'izy ireo ho mishnah milamina. Indraindray dia tsy azo atao akory ny mamoaka didy halakhic mazava, saingy azo antoka fa tsy misy dikany ny meta halakhic milamina.
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny olana dia tsy ny fahasarotana, ny hamaroan'ny loharano, na ny fahasarotana hafa amin'ny fanaovana izany. Miady hevitra aho fa mety tsy misy ny sub. Na iza na iza maka mishnah toy izany avy amin'ny halakhah, araka ny hevitro, dia mamita-tena momba izany, na farafaharatsiny mirotsaka amin'ny famoronana fandikan-teny mampiady hevitra. Amin'ny maha-famaritana azy dia tsy heveriko fa mahalala na iray aza amin'ireo izay miatrika ireo olana ireo izay nanova tanteraka ny foto-pisainany taorian'ny fandalinana ny halakhah (afa-tsy ny toe-javatra manokana izay ahitan'izy ireo fanambarana halakhika mazava). Ny fifanakalozan-kevitra toy izany dia tsy mandeha amin'ny fametrahana tanjona aorian'ny tifitra zana-tsipìka. Na iza na iza sosialista dia hahita ny sosialismany ao amin'ny Torah, ary toy izany koa ny kapitalista na izay ambany socio-economic hafa. Izany dia miteraka ahiahy mafy amin'ny tsy fahamarinan-toetra ara-tsaina. Mihevitra ny olona fa tsy maintsy misy toerana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny teoria, mahita toerana toy izany ao anatin'ny tenany izy ireo, ary avy eo dia manomboka mampiasa fahaiza-mamorona fandikana tsy maharesy lahatra, teny notsongaina avy amin'ny loharano voafantina sy ny toy izany, mba hahazoana zavatra mafy orina amin'ity fisafotofotoana anarkika ity.
Hanampy fanontaniana iray hafa aho eo amin'ny sisin'ny teniko: Eritrereto hoe nahomby tokoa aho tamin'ny fanesorana ny fizarazarana ideolojika-sosio-ekonomika mirindra, tokony hanery ahy ve izany? Ny zava-misy fa ny lalàna sasany dia mifototra amin'ny fiheverana ara-tsosialy sy ara-toekarena iray dia tsy voatery manery ahy handray izany. Afaka manolo-tena sy mampihatra ireo lalàna ireo aho (raha tena mamatotra tokoa izy ireo) nefa tsy mandray ny foto-kevitra fototra. Ny dikan'izany dia raha toa ka misy fehin-kevitra fanampiny izay tsy voalaza ao amin'ny halakhah ho mamatotra io hevitra io - tsy mahatsiaro adidy amin'izy ireo aho. Amin'ny ankapobeny dia afaka milaza aho fa manana tsy fitovian-kevitra meta-halachic ihany koa aho. Efa nasehoko fa miara-miasa tsara amin'ity raharaha ity aho, sa tsy izany?
Raha ny fahitako azy na dia manana finiavana amin'ireo sehatra ireo aza ny halakhah, ny fanambarana marina indrindra azoko lazaina momba izany dia ny hoe ny halakhah dia mitaky antsika hampihatra ny saina sy hanao zavatra amin'ny fomba mendrika sy lojika. Manomboka izao dia samy hanapa-kevitra samirery izay mitombina sy mitombina ary mandrafitra ny fomba fijeriny ara-tsosialy sy ara-toekarena. Izany fahatsapana izany no sitrapon'ny Torah sy Halacha avy aminy. Saingy mazava ho azy fa amin'ny ambaratonga voalohany ihany izany, raha toa ka mihevitra isika fa ny teoria dia tena manana faniriantsika amin'ny sehatra toy izany. Hiroso amin’ny ambaratonga faharoa isika izao.
B. Tokony hisy toerana ideolojika mazava ve amin'ny teoria?
Ankehitriny dia mila manontany tena isika hoe maninona no mihevitra fa tokony hisy toerana ideolojika amin'ny teoria momba ireo fanontaniana ireo? Tsy azoko io imperialisma halakhic io, ary araka ny fijeriko azy dia tsy mitana rano izany. Tsy misy izany toerana izany ary tsy tokony hisy. Tsy hoe satria sendra tsy miatrika ireo fanontaniana ireo ny halakhah, na koa satria sarotra ny maka toerana ao aminy noho ny fahasahiranana isan-karazany (ibid.), fa angamba noho izy (= ny halakhic collective?!) dia nisafidy (angamba tsy nahatsiaro tena). ) tsy hirotsaka amin'izy ireo ary tsy hanapa-kevitra momba azy ireo. Tsy mihevitra azy ireo ho toetrany izy ka noho izany dia avelako hiala amin'ny fanjakany izy ireo.
Te-hanolotra thesis hafa ho an'ny ekena aho eto. Olombelona daholo isika, ary anisan'ny vondron'olombelona ny Jiosy. Ny Jiosy aloha dia olona ary avy eo dia Jiosy, araka ny voalazan'i Moharram Tzitzaro Zatzokal hoe: "Tsy misy na inona na inona ho an'ny olona hafa ho ahy" (ibid., Ibid.). Miaraka amin'io fizarazarana eo amin'ny rihana roa io dia azo atao ihany koa ny mizara ny tontolo sarobidy (Jiosy !?) ho rihana roa: 1. Ny gorodona manerantany, izay misy soatoavina manerantany amin'ny lafiny iray ary ny soatoavina manokana amin'ny lafiny iray. hafa. 2. Ny gorodona halakhic manokana ho an'ny Jiosy.
Ny rihana voalohany dia misy soatoavina izay tsy mila ampidirina amin'ny Halacha. Ny sasany dia satria mamatotra ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny Jiosy (eo amin'izao rehetra izao) ihany, ary ny sasany noho ny fisian'izy ireo dia tsy maintsy atao an-tsitrapo sy manokana ary tsy mitovy amin'ny fomba mamatotra antsika rehetra araka izay takiana amin'ny fanjakana halakhic.
Ny vazivazy dia fantatra amin'ny anaran'ny raby avy any Ponivez izay nanantona saina teo amin'ny tafon'ny Ponivez yeshiva ao Bnei Brak isaky ny fetin'ny fahaleovantena ary tsy nanao fiangaviana, fa tsy nanao fiderana. Rehefa nilaza ny amin’izany Andriamanitra fa Zionista toa an’i Ben-Gurion, dia tsy niteny fiderana na nitalaho i Ben-Gurion. Maro ireo ultra-Orthodox henoko no tena faly tamin'ity vazivazy ity noho ireo Sionista adala sy ratsy fanahy, saingy heveriko fa tsy niditra tao amin'ny halalin'ny dikany izy ireo. Ny fikasan’ny raby dia ny hilaza fa Zionista laika izy, toa an’i Ben-Gurion. Tsy relijiozy ny Zionisma, fa soatoavina nasionaly, ary noho izany dia manolo-tena amin'izany izy na dia tsy miditra amin'ny halakhah aza. Fetim-pirenena laika ankalazain'ny raby Ponivez ny Andron'ny Fahaleovantena, ary tsy nanan-tombony tamin'ny fanomezana azy io ho toetra ara-pivavahana sy ny fametrahana azy io amin'ny fitsipika halakhic.
Miverina amin'ny Andro Fahatsiarovana ny Holocaust
Amin’izao andro izao, ny vahoakan’ny Isiraely dia mahatsiaro ny Fandripahana Tambabe amin’ny fomba samihafa, ny sasany amin’izany dia voarakitra ao amin’ny lalàna sy amin’ny fanao ara-tsosialy amin’ny ankapobeny ary ny sasany amin’izy ireo manokana. Toa mahafa-po tanteraka ahy ireo fomba ireo, ary tsy hitako izay ilana na antony hanamafisana azy ireo amin'ny fitsipika halakhic, na dia misy fikambanana mahefa afaka manao izany aza ankehitriny. Izy ireo dia ao amin'ny rihana voalohany amin'ireo roa voalaza etsy ambony, ary tsy misy antony tokony hamindrana azy ireo any amin'ny faharoa. Androm-pirenena tsy manana toetra ara-pivavahana ny Andro Fahatsiarovana ny Holocaust, ary tsy misy maharatsy izany. Tsy mahavery ny hasiny izany, ary tsy marina fa ny zava-tsarobidy rehetra dia tsy maintsy ampidirina ao anatin’ny rafitra halakhic na ara-pivavahana mihitsy aza.
Toy izany koa, amin'ny fetin'ny fahaleovantena, azo antoka fa midera an'Andriamanitra sy midera an'Andriamanitra aho, saingy tsy hitako ho andro manan-danja ara-pivavahana izany ary azo antoka fa tsy halakhic. Ny dikany dia nasionaly, ary izaho amin'ny maha-Zionista laika ahy (toa an'i Raby ao Ponivez sy Ben-Gurion) dia miray tsikombakomba amin'izany fotsiny. Tsy milaza aho hoe Hillel satria ny Lehiben'ny Rabinate dia nanapa-kevitra fa Hillel no tokony holazaina, ary izany dia tsy noho ny fifandraisako fanta-daza amin'ity andrim-panjakana ity. Midera aho satria heveriko fa mety sy tsara ny manao izany. Izany no fomba anehoako ny maha mpivavaka ahy.
Inona àry ny taloha?
Tany aloha dia tena nampifantoka ny sandany sy ny adidy rehetra amin'ny halakhah izy ireo. Ny olon-kendry sy ny fitsarana no mamaritra ny andro fifadian-kanina sy ny firavoravoana ary ny androntsika. Saingy heveriko fa vokatry ny toe-javatra noforonina izay tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely izany. Ny mpanoratra ny toritenin'ny raby dia miresaka momba ny rafi-panjakana roa mifanitsy, dia ny mpanjaka sy ny fitsarana. Noho ny antony sasany ao amin'ny loharanon'ny Sages dia saika tsy hita soritra ny rafitry ny mpanjaka. Misy tribonaly manamboatra ny lalana ara-potoana (sub-MOC), izany hoe ny minisiteran’ny Fitaterana. Manitsy ny fitsipika izy ireo ary mametraka fomba fiasa, ny fitsipiky ny fifidianana eo amin'ny fiarahamonina dia faritan'ny halakhah ary miseho ao amin'ny Shulchan Aruch. Mazava ho azy fa mila ny faneken'ny olona manan-danja (= arbitrateur) koa izy ireo. Saingy heveriko fa vokatry ny fiforonan'i Toshba'ap tamin'ny fotoana tsy mbola nisy mpanjaka teo amin'ny Isiraely izany, ary ny fahefan'ny governemanta laika-pirenena dia nifindra avy amin'ny mpanjaka ho any amin'ny BID lehibe. Koa ny lohan'ny Synedriona dia avy amin'ny taranak'i Davida, satria izy ireo no mpanjaka. Nanomboka teo ka mandraka androany dia efa zatra ny tsy misy ny laika nasionaly ary ny zava-drehetra dia an'ny mpanelanelana sy ny fitsarana ary ny lafiny ara-pivavahana sy halakhika. Raha tokony ho ny mpanjaka no mamaritra ny fitondran-tenantsika mihoatra ny halakhah, BD dia mikapoka sy manasazy tsy ara-drariny. Io fahefan’ny BID io dia taratry ny fahefan’ny mpanjaka tamin’ny fitondrana tany am-boalohany.
Tao anatin'ny zavatra iray ihany no nahazatra anay fa Torah ny zava-drehetra ary nandeha ny zava-drehetra. Tsy misy ny fiainan'olombelona tsotra, ary azo antoka fa tsy misy soatoavina, ivelan'ny halakhah. Ny zava-drehetra dia tokony hotarihin'ny mpanelanelana sy ny raby. Saingy ankehitriny dia misy ny fahafahana miverina amin'ny mahazatra. Ny vahoakan'Israely dia manana didim-pirenena laika ao amin'ny BH (BH tsy amin'ny laika fa amin'ny fiverenan'ny lafiny laika amin'ny fiainan'ny tenantsika rehetra. Misy milaza azy io ho fiverenana amin'ny sehatry ny tantara). Tsy misy antony hanohizana hifikitra amin'ny endrika efa nahazatra antsika noho ny pathologies ara-tantara isan-karazany.
Ho fehin-kevitra, mifanohitra amin'ny intuition manjaka, ny sesitany dia tsy vitan'ny hoe nanery ny saha halakhah (na dia nitranga tamin'ny lafiny sasany aza izany) fa nanitatra azy ireo mihoatra ny fianarana sahaza amin'ny sehatra hafa. Tokony hiverina amin'ny fahazarana ny olona iray ary tsy hanahy mafy momba ny satan'ny halakhah amin'ny alàlan'ny fanondroan'ny imperialista azy sy ny sehatra misy azy ary hamela azy hanana eo ambanin'ny elany ny habaka rehetra amin'ny fiainantsika. Mba hanesorana ireo havana kristianina havana, aoka isika tsy ho any amin’ny helo: omeo ho an’ny lalàna izay azy, ary ho an’ny mpanjaka (na ho an’ny olona) izay azy.
Momba ny fahalalahana maneho hevitra, ny fandavana ny Holocaust ary ny "Aza Miandry" (Tsanganana 6)
Lalàna momba ny fananana ao amin'ny Halacha sy Lalàna
Fananganana Holocaust sy Sectorality - ho an'i Adi Ofir (Haaretz Books - 2001)
18 Hevitra momba ny “Tokony hapetraka ao Halacha ve ny fifadian-kanina ho fahatsiarovana ny Fandripahana Tambabe? (Tsanganana faha-4)”
29 Elul 09 - 2016/14/53 amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy heverinao ve fa na dia tsy hita ao amin'ny Halacha aza ny mishnah voalamina araka ny namolavolana azy hatramin'ny taranaka fara mandimby, dia afaka mahita iray farafaharatsiny ao amin'ny soson'ny Torah voasoratra? Hitako tao amin’ny bokinao Andriamanitra milalao daoly fa milaza ianao fa tsy momba ny soatoavina ara-pitondrantena ny Baiboly fa momba ny soatoavina ara-pivavahana. Izany hoe, araka ny teninao (araka ny fahazoako azy) ny Jodaisma rehetra, ny Torah voasoratra sy ny Torah am-bava dia ao anatin'ny sosona izay mivoaka avy amin'ny fiainan'ny olombelona normative ary tafiditra ao anatin'ny sokajy "fivavahana". Ary manontany aho hoe inona ilay sokajy "fivavahana", inona no dikan'izany? Zavatra tsy misy dikany fotsiny tsy misy lojika ho an'ny olona mitazona azy? Ary na iza na iza mihevitra fa misy teboka ao amin'ny mitzvos dia tsy midika izany fa tokony hapetraka eo amin'ny sehatra manara-penitra sy mifandraika amin'ny olombelona / fiaraha-monina / olombelona izy ireo? Ary izany, ohatra, dia tsy azo tsoahina avy amin'ny mitzvah ny fitsipika ara-toekarena shemita tahaka ny nataon'i Jabotinsky?
Toa tokony hotohizana amin’ny dingana iray ny hetsika aseho eto. Amiko, ny sesitany dia tsy vitan'ny hoe namorona imperialisma ny fivavahana fa tamin'ny ankapobeny dia namorona ny sokajy fivavahana, sosona izay tsy hita ao amin'ny Baiboly. Ny didy dia nomena ho an’ny tombontsoam-pirenena voalohany indrindra “hanao izany eo amin’ny tany”. Heveriko fa ny fifadian-kanina ataontsika amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy raisina araka izay lazainao amin'ny fikarakarana ny Andro Famonoana Tambabe anio, eo amin'ny sehatra nasionaly.
Tiako ny fanondroanao.
Heveriko aloha fa tsy hita ny zava-misy. Tena tsy maharesy lahatra ny ezaka natao. Zava-dehibe ny tsy miraharaha ny zava-misy ary mametraka izany amin'ny faniriantsika (na dia mendrika sy tsara aza). Heveriko fa na ao amin'ny Torah voasoratra aza dia tena amorphous. Mazava ho azy fa ho hitanao eny rehetra eny ny soatoavina iraisan'ny rehetra. Fa ny fandalinana ny Torah na ny Halacha dia tsy manova na inona na inona, araka ny hevitro, na inona na inona amin'ny fomba fijery noforoninao manokana (ary zava-misy ihany koa izany raha ny hevitro dia mahita izay tadiaviny ny olona).
Ekeko fa tao amin'ny Sages dia tsy nisy fanavahana ny fitondran-tena sy ny fivavahana ary angamba koa ny Rishonima. Amin'ny lafiny iray, ny sesitany no namorona izany fanavahana izany (ary amin'ny ankapobeny, ny tantaran'ny halakhah dia ny famoronana fanavahana izay tsy nisy teo aloha. Ny farany dia manao hevitra tsy ao amin'ny mishnah sy ny sisa). Fa raha ny fahitako azy dia fanehoana fa mandroso (fa tsy mihemotra) izao tontolo izao. Takatsika izao fa misy karazana soatoavina roa, izay fantatry ny maro amin'ireo tompontsika eo amin'izy ireo. Ny famantarana izany (izay manampy antsika hamantatra ny zavatra tsy voamarik'izy ireo) dia hitantsika ankehitriny fa azo atao ny mitondra fitondran-tena na dia tsy misy fanoloran-tena ara-pivavahana aza. Koa nahoana no heverina fa natao ho an'ny tanjona ara-pivavahana ny fanoloran-tena ara-pivavahana? Amin'izao fomba fijery izao dia tsy ilaina izany ankehitriny.
Raha ny fandikana ny tanjona ara-pivavahana dia heverinao fa tsy misy soatoavina mihoatra ny soatoavin'ny fitondran-tena. Fiheverana izay tsy hitako ifotony, ary azo antoka fa tsy rehefa mijery ny Torah sy ny Halacha. Amin'ny ampahany lehibe amin'ny zavatra dia toa tsy hita ny fanamarinan-tena ara-moraly. Koa nahoana no heverina fa natao ho an'ny fitondran-tena ny tsirairay? Raha ny hevitro dia misy indray ny fifikirana amin’ny fanirian’ny fo sy ny tsy firaharahana ny zava-misy.
1. Mazava fa ny fikarohana alibi de baiboly, raha ny baiboly dia strata samihafa maneho ny sekoly sy ny fomba fijery samihafa eran'izao tontolo izao dia tsy misy azo resahina. Fa raha manaiky ny refin'ny fanambarana ao amin'ny Baiboly isika, raha ny hevitro, dia misy toerana iray azo amboarina na voadio amin'ny fandinihana ny andininy. Ohatra, ny fifandraisan'ny Baiboly amin'ny mpanjaka dia olana iray izay heveriko fa azo resahina amin'ny alàlan'ny fanadihadiana henjana. Heveriko, ohatra, i Maimonides, izay nahita tao amin’ny fitsarana ny taratasin’ny fanendrena ny mpanjaka teo amin’ny Isiraely, dia tsy niraharaha ny dikan’ilay toko manontolo tao. Mety tsy ho vitantsika ny handresy lahatra ny hafa izay matoky ny toerana misy azy (satria mety tsy handresy lahatra an'i Dawkins isika) fa azo antoka fa ny fandalinana ny Baiboly dia mety hitarika hevitra vaovao momba ny olana maro. Amin'ny ankapobeny ny fahitako azy dia tsy tokony hisy fifanoherana eo amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona sy izay voasoratra ao amin'ny Torah tahaka ny nitarainan'i Abrahama manoloana ny fandravana an'i Sodoma. Noho izany dia heveriko fa ny Baiboly irery ihany no tsy ampy hamoronana hevitra ara-moraly hatrany am-boalohany fa manampy izany.
2. Tsy azoko hoe ahoana no ilazan'ny hoe azo atao ny mitondra fitondran-tena tsy misy fanoloran-tena ara-pivavahana fa misy sokajy roa. Tsy milaza aho fa ny relijiozy ihany no ara-moraly fa azo antoka fa ny tanjon'ny mitzvos dia mitovy sokajy. Ny hoe tsy afaka mahazo ny tsiron'ny mitzvos foana ny olona iray dia tsy mitaky ny fananganana sokajy "fivavahana". Indraindray isika dia tsy ampy ny contexte ara-tantara mba hahatakarana ny zavatra niseho tamin'ny imperative saingy tsy midika izany fa tsy misy ny antony ara-moraly. Indrindra moa fa tsy mbola nomenao famaritana tsara momba ny "soatoavina ara-pivavahana" aho. Amin'izao fotoana izao dia tsy azoko atao ny mihevitra fa misy sokajy "religieux" izay tsy haiko ny atao hoe "mameno lavaka".
1. Tsy tokony hisy ny fifanoherana, fa ny fanontaniana dia ny hoe misy ve ny fanavaozana. Afaka mahita fianarana Baiboly tsy eken’ny olona ve ny olona iray, ka manova ny fiheverany aorian’ny fianarany? Tsy mieritreritra aho fa hitranga izany. Abarbanel izay nandà ny maha-mpanjaka dia nahita ny foto-pisainany tao amin'ny Baiboly, ary i Maimonides izay tsy nandà dia nahita ny torontoronina. Toy izany koa ankehitriny.
Mazava fa ny fianarana rehetra amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny boky na sarimihetsika rehetra dia manokatra fanontaniana ary afaka manova fomba fijery. Fa ny fanovana dia atao amin'ny dingana anatiny fa tsy noho ny fahefan'ny Baiboly (fa satria hitako fa hafa ny tsoa-kevitra ao dia manery ny tenako hanova ny hevitro momba ny olana iray aho).
2. Tsy manana famaritana ny hasarobidin'ny fivavahana aho. Fa ho ohatra dia lazaiko fa ny fiampangana ny vadin'i Cohen izay nozahana hisaraka amin'ny vadiny dia toa tsy fiampangana ho an'ny tanjona ara-moraly. Ny tanjony dia ny hitandro ny fahamasinan’ny fisoronana. Tanjona ara-pivavahana sy maloto fitondran-tena izany. Na dia ny fandrarana ny fihinanana henan-kisoa aza dia toa tsy fandrarana izay tanjona ara-moraly. Azo lazaina foana fa misy tanjona ara-moraly izay tsy takatsika rehetra. Fanambarana poakaty izany, ary tsy hitako izay antony hieritreretana izany.
Ny hevitro dia hoe raha moraly ny tanjon'ny mitzvos, dia tsy ilaina ny mitzvos (farafaharatsiny androany). Rehefa dinihina tokoa, ny tanjona ara-moraly dia azo tratrarina na dia tsy misy azy ireo aza (ary izany no nitondrako porofo avy amin'ny olona moraly tsy voafatotry ny halakhah). Inona ary no ilana ny fitandremana ny lalàna? Aoka ianao ho ampy fitondran-tena.
1. Saingy androany aho dia afaka manapa-kevitra eo amin'ny fifandirana eo amin'i Maimonides sy Abarbanel ary mamaritra fa ny hevitr'i Maimonides dia toa lavitra ny fahatsoran'ireo andininy araka ny fitaovana fandikana ny fandalinana ny Baiboly. Mazava ho azy fa tsy midika izany hoe manery ny tenako ho azy aho fa araka ny nampianarinao anay (araka ny fahazoako azy) araka ny fomba fiasa synthétique dia tsy misy izany hoe fiovan'ny toerana mivantana avy amin'ny arguments fa avy amin'ny dingan'ny retorika fotsiny. Noho izany dia heveriko fa ny famakiana ireo andininy miaraka amin'ny finoana fa lahatsoratra manan-kery ity dia afaka manapa-kevitra hanohana ny fiovan'ny fomba fijery amin'ny faran'ny dingana.
2. Tsy azoko indray ny antony mahatonga ny famoronana sokajy tsy misy famaritana ho tsy misy dikany noho ny fanamarihako fa tsy nahatratra ny tombontsoa rehetra avy amin'ny didy isika. Tsy midika na inona na inona amiko ny "valeur relijius" hatreto fa tena mameno lavaka tokoa. Momba ny fanontaniana hoe maninona no mitazona mitzvos raha azo atao ny mitondra fitondran-tena tsy misy mitzvos. Heveriko fa azo atao ny mamaly na hoe amin'ny alalan'ny mitzvos dia azo atao tsara kokoa ny fitondran-tena, na izany no tian'ny olon-kendry holazaina amin'ny hoe "ny mitzvos dia foana ho an'ny ho avy". Izaho manokana dia mihevitra fa ny sasany amin'ireo mitzvos dia efa nandany ny anjara asany ara-tantara toy ny fanandevozana ary ny sasany dia mbola miandry ny fahatanterahan'izy ireo.
1. Manapaha hevitra avy eo. Ny fanontaniana dia hoe nahoana izany no tsy maharesy lahatra an'ireo tsy mitovy hevitra aminao? Noho izany dia misalasala aho ny amin'ny fahaizana mamorona fomba fijery sy soatoavina avy amin'ny Baiboly sy Halacha. Aminao dia toa an'i Abarbanel izany saingy mazava amiko fa satria tsy mpanjaka ianao. Miresaha amin'ny mpanjaka dia ho hitanao fa mamoaka famantarana izy ireo ary maneho fomba fijery mifanohitra (izay mifanohitra amin'ny zavatra soratanao raha ny hevitro dia manana toerana). Ohatra ratsy anefa ny fanontanian’ny mpanjaka, satria ny Torah dia milaza an’izany mazava tsara. Miresaka fanontaniana halakhic sy ideolojika tsy mazava aho. Toy izany koa, azonao atao koa ny mitondra ahy fa ny Torah dia manohana ny finoana an'Andriamanitra.
Alaivo mora, ny zava-misy dia tsy mitondra fiovana eo amin'ny fiheverana izany.
2. Ny hoe tsy misy famaritana ny zavatra iray dia tsy midika fa tsy misy dikany ny miresaka momba izany (fa tsy amin'ny maha-positivista azy). Ny tenin'i Muharram R. Piersig dia fantatra ao amin'ny bokiny Zen sy ny Art of Motorcycle Maintenance momba ny famaritana ny foto-kevitry ny kalitao, ary ny zava-misy fa ny Grika (ratsy fanahy) dia nandondona ny atidohantsika tamin'ny zava-misy fa tsy maintsy voafaritra ny zava-drehetra. . Raha heverinao fa heveriko fa ho tonga amin'ny fanatsoahan-kevitra ianao fa tsy hainao ny mamaritra ny foto-kevitry ny soatoavina ara-moraly. Tsy misy hevitra fototra azo faritana. Ohatra momba ny soatoavina ara-pivavahana no nomeko anao: ny fahamasinan’ny fisoronana, ny fahamasinan’ny tempoly sy ny toy izany.
Nitondra ohatry ny fanandevozana ianao, nefa nanao fiainana mora ho anao. Ny ankamaroan'ny Torah sy Halacha no resahiko. Tsy nanatontosa ny andraikiny izy ireo, fa tsy nisy vidiny ara-moraly velively. Inona àry no anton’izy ireo? Milaza fanambarana teorika ianao fa amin'ny alàlan'ny mitzvos dia mety ho ara-moraly kokoa ny olona iray. Tsy hitako izay famantarana izany. Tsy amin'ny fandinihana ny mitzvos sy nomanina (tsy misy ifandraisany amin'ny fitondran-tena ny ankamaroany), na amin'ny fandinihana ny zava-misy. Noho izany raha ny hevitro dia tena mahavaky fo ireo fa tsy fomba fijery mahonon-tena amin'ny zava-misy.
29 Elul 09 - 2016/14/54 amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha ny fahalalako azy dia hitanareo fa zava-boahary (tsy misy fitsabahan'Andriamanitra) ny fananganana ny fanjakana. Raha eny, inona no fiderana an’Andriamanitra holazaina amin’io toe-javatra io?
Takatro tokoa fa ankehitriny dia tsy misy idiran'Andriamanitra amin'ny tantara, tsy amin'ny fananganana fanjakana ihany (ary na misy aza dia tsy fantatro hoe aiza sy rahoviana no mitranga izany). Noho izany, rehefa misy zavatra mahafaly mitranga (= "fahagagana"?) dia fotoana iray ihany ny milaza fiderana ho fieken-keloka ny nahariana izao tontolo izao sy ny zavaboariko.
29 Elul 09 - 2016/14/55 amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy azoko araka ny hevitrao, inona marina no maha samy hafa ny fanoloran-tena ho an'ny "Dina Damlakhuta Dina" izay nifamatotra sy manankery tao amin'ny halakhah na dia teo ambany fitondran'ny jentilisa tany an-tsesitany aza, sy ny zava-misy ankehitriny, angamba ny tianao holazaina amin'ireo voalaza etsy ambony ireo. ny lalàna dia manan-kery ihany ho an'ny lalàna ambony ho an'ny faritra fanampiny sy ny soatoavina manerantany sy ny toy izany?
Tsy azoko ilay fanontaniana
Hanonona sombiny avy amin’ny fanamarihanareo aho: “Tao anatin’ny raharaha iray ihany, dia nanjary zatra ny zava-misy fa Torah ny zava-drehetra ary mandeha ny zava-drehetra. Tsy misy ny fiainan'olombelona tsotra, ary azo antoka fa tsy misy soatoavina, ivelan'ny halakhah. Ny zava-drehetra dia tokony hotarihin'ny mpanelanelana sy ny raby. Saingy ankehitriny dia misy ny fahafahana miverina amin'ny mahazatra. Ny vahoakan'Israely dia manana didim-pirenena laika ao amin'ny BH (BH tsy amin'ny laika fa amin'ny fiverenan'ny lafiny laika amin'ny fiainan'ny tenantsika rehetra. Misy milaza azy io ho fiverenana amin'ny sehatry ny tantara). Tsy misy antony hanohizana hifikitra amin'ny endrika efa nahazatra anay noho ny aretina ara-tantara isan-karazany. ” Ary noho izany dia manontany aho: na dia tamin'ny fotoana "noho ny fahotanay aza no nanesorana anay hiala amin'ny taninay", na dia teo ambanin'ny fitsipika sasany aza izahay, izay fanapahan-kevitra (izay avy amin'ny filaharana ivelan'ny halakhah ihany koa) dia nanana fahefana halakhic aho. , raha mbola tafiditra ao amin'ny sokajy "Dina Damlakhuta Dina", ka inona no refy miampy ny hevitra?
Enga anie aho izao no nanazava bebe kokoa ny tenako.
Azoko. Fa ny fitondrana eo ambanin'ny olon-kafa dia manahirana sy tsy tiantsika. Marina fa manana validity halakhic i Dina Damlakhuta, ka ahoana? Midika ve izany fa tsara ny miaina ao ambanin'ny rindrina Franz Josef? Ny hafaliana dia hoe niverina nitantana ny fiainantsika isika fa tsy hoe manana validity halakhic.
Misaotra betsaka anao nanazava zavatra! Hahazo didy sy hery mivantana ianao.
29 Elul 09 - 2016/14/58 amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha hetsika nasionaly fotsiny ny fifadian-kanina dia heverinao fa ho tafita velona? Afaka manolo ny vavaka atao any amin’ny synagoga rehetra ve ny lanonana atao any amin’ny faritry ny fanjakana?
Ny Holocaust dia fisehoan-javatra mahery vaika kokoa amin'ny ampahafolon'ny Tevet na ny fifadian-kanina Gedalia. Raha ny hevitro dia tsy isalasalana fa ny fomba tsara indrindra hampita izany amin'ny taranaka ho avy dia amin'ny andro fisaonana ara-pivavahana, izay andro fifadian-kanina toy ny mahazatra. Firy amin’ireo olom-pantatrao (mivavaka) no mahafantatra an’i Jeho Mpanjaka? Ary firy no mahalala an'i Gedalia Ben Ahikam?
Ny hatao? Tsaroan’ny Jiosy tsara ny zavatra mifandray amin’ny sakafo, na fety izany na fifadian-kanina. Nasehon’ny tantara fa miasa tsara kokoa izy io. Ary ny porofo fa tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo fetim-pirenena jiosy velona (Megilat Ta'anit) afa-tsy ireo daty nekena tao Halacha.
Fitakiana fitaovana io. Miatrika ny fanontaniana aho raha mitaky na manantena ny hanorina andro fahatsiarovana toy izany ny halakhah. Tsy mitovy ny fanontaniana hoe inona no mahomby kokoa ary tokony hodinihina manokana.
Mikasika ny fanontaniana faharoa dia ny hevitro dia raha manadino izy ireo - dia hanadino. Indraindray dia lasa lavitra sy tsy dia misy dikany loatra ireo zava-nitranga (toa tsy dia zava-dehibe amiko ankehitriny ny mahatsiaro an’i Gedalia na i Jeho). Ny fanamarihanao dia mifototra amin'ny fiheverana miely patrana fa ny fivavahana sy ny halakhah dia tokony hanome tolotra ho an'ny soatoavina nasionaly sy manerantany. Tsy ekeko izany.
29 Elul 09 - 2016/15/01 amin'ny XNUMX:XNUMX
Efa nandre zavatra maro momba anao aho hatramin'ny andron'ny fampianaranao tao Jerosalema avy amin'ny sakaizan'ny Raby Uriel Eitam.
Namaky fatratra ny lahatsoratrao momba ny fametrahana fifadian-kanina amin'ny Andron'ny Holocaust aho, manaiky ny ankamaroan'ny zavatra aho.
Efa im-betsaka aho no naheno an'i Raby Amital efa maty hoe: "Tsy ny zava-drehetra dia hevitra Torah." "Tsy ny zava-drehetra tokony holazaina momba ny Da'at Torah" sy ny maro hafa
Mifalia amin'ny teninao momba ny fiderana amin'ny fetin'ny fahaleovantena.
Ahoana no ahafahana milaza fiderana noho ny fahagagana nitranga ka milaza fa tsy misy dikany ara-pivavahana izany? Na tsy azoko izay lazainao.
Te hanana fanazavana aho.
Eritrereto ny fanambarana izay namorona (manavaka) taorian'ny nandehanana tany amin'ny efitra fandroana. Misy lafiny ara-pivavahana ve ny fieken-keloka amin'Andriamanitra fa nosokafany ny lavaka? Misy lafiny ara-pivavahana ve ny sakafo maraina arahabaiko aloha sy aorian'izany? Amiko dia toy ny trano fidiovana na sakafo maraina ny firenena.
Momba ny fiderana fahagagana, fanontaniana hafa izany. Ny fahitako azy dia tsy misy fahagagana amin'izao fotoana izao (na farafaharatsiny tsy misy filazana fa misy), ary tsy misy mihitsy ny fandraisan'Andriamanitra anjara amin'izao tontolo izao. Rehefa misy zava-mitranga mahafaly mitranga amintsika, toy ny fananganana ny fanjakana, dia izany no mahatonga ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny nahariana izao tontolo izao sy ny zavaboarintsika. Fa hanitatra izany any Gaza aho (?) Ao amin'ny boky soratako momba ny teolojia ankehitriny.
Saingy manana fahefana hanitsy ny fitahiana ho an'ny tenantsika ho amin'ny fetin'ny fahaleovantena ve isika?
Tsy maintsy resahina izany. Farafaharatsiny ho an'ny fomba sasany (ny Meiri) dia misy lalàna milaza fiderana amin'ny fahagagana rehetra momba ny famonjena sy ny fiaiken-keloka, ary avy eo dia toa tokony hitahy ny olona iray na dia tsy misy fitsipika manokana aza. Toy ny tsodrano amin'ny fihinanana paoma isaky ny mihinana isika ary tsy mila manamboatra tsodrano amin'ny paoma tsirairay.
Na izany na tsy izany dia azo antoka fa tsy misy fetra ny fiderana tsy misy tso-drano.
Ary misy toerana tsara ho an'i Sabra fa na dia misy fitahiana aza dia tsy misy fetra. Raha ny Isiraely taorian'ny fahagagana nataon'i Chanukah dia nilaza hoe Hallel amin'ny tsodrano avy amin'ny tenany tsy misy fitsipiky ny olon-kendry, ary misy olana amin'izany? Ny sasany amin'ireo taloha koa dia voatahy amin'ny fomba amam-panao, ary amin'ity raharaha ity dia misy ny fifanakalozan-kevitra momba ny fitahian'ny fiderana. Saingy amin'izany dia misalasala aho, sy ny sisa.
Sarotra amiko ny mahita ny Fanjakan’i Israely ho “fanompoana”.
Niverina tany Israely ny vahoakan’Israely rehefa afaka 2000 taona. Mampalahelo fa tsy tafatsangana ny fanjakana 20 taona talohan'izay....
Noho ny fanjakana dia misy vondrona ny carte postale. Niverina teo amin’ny vahoakan’i Israely ny fitondrana mahaleo tena. Antsoina hoe “andron’ny Mesia” ny fomba fiteny ao amin’ny olon-kendry.
Ny fiderana dia tsy natao ho fahagagana fotsiny fa ho famonjena
Amin'ny resaka fahagagana.
Ny fahagagana dia tsy fandikana ny lalàn'ny natiora fotsiny fa fandikana ny lalàn'ny tantara na lojika.
Taiza koa no nanamarika tranga iray izay nahatonga ny olona niparitaka tany amin'ny faran'ny tany niverina tany amin'ny taniny taorian'ny 2000 taona?
Mametraka azy. Developer. Nisy andiana carte postale natao tao. Inona koa no ohatra hafa?
Moa tsy ny mpaminany va no haniry izany amin'ny fahitany?
Raha ny marina, raha 80 taona lasa izay, dia ho nilaza tamin'i Mordekay avy any Maraoka sy Libish avy any Polonina izy ireo. Ary ny zanany sy ny zafikeliny dia hiara-mitoetra ao amin'ny tanin'ny Isiraely, eo ambanin'ny fanapahan'ny Zanak'Isiraely, ka hitoetra ao an-tranony. Hilaza ve izy ireo fa toy ny trano fidiovana?
Raha nampitahaiko tamin’ny fanompoana ny Fanjakan’i Israely, dia tsy te hilaza aho hoe tsy misy vidiny na maharikoriko toy ny fanompoana ny fanjakana. Ny tiako holazaina dia fitaovana (zava-dehibe) ho antsika ny fanjakana, fa tsy misy hafa. Tena faly aho fa eo am-pelatanantsika io fomba io, ary efa taona maro tokoa no tsy nisy, ary mbola tsy hitako ho sanda ara-pivavahana izany. Sanda nasionaly indrindra izany. Eny tokoa, ny fiavian’ny Mesia dia fampanantenana toy ny fanomezana ny orana. Ny andron'ny Mesia koa dia tsy manana lanja ara-pivavahana satria tsy misy fitandremana ny mitzvos, fa ny ankamaroany dia fomba ahafahantsika mitandrina mitzvos bebe kokoa (ny Tempoly, sns.). Ny fananana harena koa dia fomba fitandremana ny didy, ary tsy mahatonga ny harena ho sarobidy ara-pivavahana. Ny fanjakana dia fitaovana amin'ny ankapobeny, ary ny tsy fisian'izany ho antsika hatry ny ela ary niriantsika sy nijaly tsy nisy izany no tena mampisavoritaka antsika (tahaka ny mahantra mahita ny vola noho ny fahasahiranany).
Raha ny amin'ny fahagagana dia misy fisafotofotoana tena mahasoa. Fahagagana ny fitsabahan'Andriamanitra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny fitsabahana dia midika fa nisy zavatra tokony hitranga tsy nisy fitsabahana (araka ny lalàn'ny natiora) ary niditra an-tsehatra Andriamanitra ary nisy zavatra hafa nitranga. Midika fanitsakitsahana ny lalàn’ny natiora izany. Izany hoe fahagagana. Tsy misy fitsabahan'Andriamanitra eo amin'ny zavaboary izay tsy fahagagana.
Ny maha-tokana ny fiverenantsika any Israely dia fantatro tsara ary ekeko izany. Midika ve izany fa nisy fahagagana teto? Fisalasalana lehibe eo imasoko. Hetsika ara-tantara tsy mahazatra izany.
Tsy azoko ny fahasamihafana. Nilaza Andriamanitra fa handefa mpaminany izy, raha tsy izany dia hisy ny orana. Nanao mitzvot izahay, rahoviana ianao no hanapa-kevitra ny tsy hanorana? Rehefa afaka herinandro? volana iray? taranaka? Ahoana no hanapahanao hevitra na hanao mitzvot na tsia? Firy ny didy tokony hatao? Ny olona sasany? Tsy azo lavina ny zava-drehetra eto. Miresaka momba ny fahatsapana ankapobeny fa tsy ny fanoherana. Araka ny efa nosoratako, ny fanatsoahan-kevitro fa tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra dia tsy vokatry ny fandavana tsy an-kijanona fa vokatry ny fahatsapana.
Azoko izao ny dikan'ny hoe "religieux" ka noho izany dia azoko ny teny hoe Fanjakan'Israely sy ny fananganana azy dia tsy misy dikany ara-pivavahana, hitako fa mivelatra kokoa ny teny hoe "relijiozy" ary noho izany eo imason'i Kibbutz Galuyot sns. manana dikany ara-pivavahana lehibe.
Toy izany koa ny amin’ny andron’ny Mesia, ary tsy hidirako eto ny resaka hoe tena hisy tokoa ve ny tempoly ho amin’ny fiavian’ny Mesia, tsy tsotra mihitsy.
Raha ny momba ny fahagagana dia mizara ny hevitra aho fa "hiposaka ny masoandro rahampitso" - tsy fahagagana izany. Tsy fahagagana ny fanatanterahana ny lalàn'ny natiora.
Mizara tanteraka aho fa tsy fahagagana ny zava-drehetra, hoy ny sasany.
Fa ny fanakambanana ny sesitany sy ny fiverenana any Israely taorian’ny roa arivo taona, fisehoan-javatra tsy mitovy amin’ny firenena hafa, dia tsy fisehoan-javatra voajanahary.
Marina fa tsy misy fiampitana ranomasina na "masoandro any Givon Dom" eto, fa misy tranga tsy voajanahary eto, miavaka amin'ny karazany sy ny karazana. Hita fa na amin'ity resaka ity aza dia tsy mitovy hevitra isika.
Fandresen-dahatra roa no tokony hozaraina: 1. Fahagagana ny nananganana ny fanjakana sy ny fanangonana ny sesitany. 2. Manana heviny ara-pivavahana ireo roa ireo. Tsy misy fiankinan-doha amin'ny roa tonta. Mety hisy fahagagana tsy misy dikany ara-pivavahana (toy ny fanokafana ny lavaka ho an'izay mihevitra azy ho fahagagana), ary mazava ho azy fa mety misy dikany ara-pivavahana izany ary tsy mahagaga izany. Miady hevitra aho fa tsy misy filazana fa fahagagana izany (tsy fahagagana ny anomalies), ary koa tsy misy dikany ara-pivavahana (Zionista laika aho). Araka ny voalaza dia azo atao ny tsy manaiky ny iray amin'ireo fitakiana roa ireo misaraka na amin'ny roa miaraka.
Ambonin'izany, dia azo inoana fa ity firenena ity dia ho lasa fitomboan'ny fanavotana antsika (inshallah), ary hisy tempoly haorina ao ary hisy fanavotana ho avy amin'izany. Saingy tsy misy dikany ara-pivavahana izany eo imasoko. Izy io dia sehatra tsy ara-pivavahana natao ho an'ny tanjona laika sy ny antony manosika tsy ara-pivavahana. Tsy misy dikany ara-pivavahana ny fihetsika toy izany.
Izany hoe ny dikany ara-pivavahana, araka ny hevitrao, dia mitaky fikasana ara-pivavahana?
Ny asan'ny olombelona dia manana dikany ara-pivavahana raha tsy misy finiavana ara-pivavahana (A.A. Leibowitz). Na dia tsy mila fikasana aza ny mitzvos fa amin'ny mitzvos ihany (noho ny sabra amin'ny contexte ho anarana kisendrasendra). Ary indrindra fa noporofoiko tao amin'ilay lahatsoratra (tamin'ny mitataovovonana, tsy fahombiazana laika amin'ny fandikan-dalàna) fa ny hevitra rehetra momba ny didy dia mila finoana. Tsy misy vidiny ara-pivavahana ny fanamainana ny heniheny tsy natao ho an’ny lanitra sy noho ny mitzvah (fametrahana an’i Israely). Manana lanja nasionaly izy io.
Mazava ho azy fa fepetra ilaina ihany izany fa tsy ampy. Tsy maintsy manana soatoavina ara-pivavahana ilay hetsika, ary ny Torah ihany no mamaritra izany. Ny olona mijoro amin’ny tongotra ilany noho ny antony ara-pivavahana izay mandratra fo dia tsy manana lanja ara-pivavahana amin’izany.
Maimonides ao amin'ny Mo'an ao amin'ny Pentateoka dia manavaka ny olona manao "amin'ny rantsany" sy ny olona manao amin'ny fikasana sy ny tanjona.
Mazava ny atao hoe avo lenta.
Ny fanontaniana dia hofaritantsika ho tsy ara-pivavahana izay fihetsika ataon'ny olona tsy misy eritreritra? Miombon-kevitra amin'ny foto-kevitra aho fa fianarana tsy maintsy atao ho an'ny maro avy amin'ny Isiraely izany, mbola misy ny manamora sy manome lanja ny asa "tsy noho ny tenany" ...
Tao amin'ny lahatsoratro momba ny hareza nataon'i Oakham dia nanazava aho fa ny fanaovana ny tsy noho ny finoana dia tsy manao tsy ho an'ny tenany manokana. Tsy fanao ara-pivavahana mihitsy izany. Jereo ny Rambam Sufach avy amin'ny Mpanjaka. Izay mino nefa tsy minia dia eto dia tsy maintsy mizara ny mitzvos sy ny tsy voafaritra hoe mitzvah. Ny fianarana ny tsara dia zavatra mahafinaritra, nefa tsy fitaovana hanazavana ny marina. Ary hitany tao amin'ny mpaneho hevitra (Rambam sy Rabbeinu Yonah sy ny hafa) momba ny Mishnah ao amin'ny Avot (Hoy Dan ny olona rehetra eo ankavanana) fa nanoratra izy ireo izay miresaka eto ihany fa mitombina izany, mifanohitra amin'ny hevitry ny besinimaro. Ary nanoratra momba izany aho tao amin'ny lahatsoratro BDD momba ny hareza Oakham.
Raha afaka mamaritra ny tiany holazaina ny raby amin'ny filazana hoe "soatoavina ara-pivavahana". Izany hoe, soatoavina ara-pivavahana ihany ny fitandremana ny mitzvah ihany (famaritana izay mamela ny raby satria azoko fa tsy tiany izany ry Leibowitzian), na inona na inona manampy ny fitandremana ny mitzvah atao amin'ny fivavahana. fahatsiarovan-tena, ary ankoatra izany: Soatoavina ara-pivavahana ve raha tsy izany.
Misaotra, ary miala tsiny raha averiko amin'ny dinika taloha sy hadino avy ao am-po ny raby.
Fiadanana lehibe.Ny hasarobidin’ny fivavahana dia midika ho lanja eo amin’ny asan’Andriamanitra. Tsy didy fotsiny ny soatoavina ara-pivavahana satria midadasika kokoa noho ny lalàna ny fivavahana amin’Andriamanitra. Na dia talohan'ny Shulchan Aruch aza dia manana lanja ara-pivavahana izy io. Eny tokoa, takiana ihany koa ny fepetra hanaovana izany noho ny asan’Andriamanitra.
Raha ny fahitako azy dia tsy manana lanja ara-pivavahana ny fanjakana amin'ny lafiny rehetra. Ny fanjakana no ilaiko fa tsy sandany. Te-hipetraka eo anivon’ny vahoakako sy ao amin’ny tanin’i Israely izay fiankinan-dohantsika ara-tantara aho. dia izay.
Raha ny amin'ny fanjakana tantanan'ny halakhah dia tsy maintsy mifanakalo hevitra momba ny hasarobidiny (satria tsy fitaovana ho an'ny olom-pirenena fotsiny ny fanjakana), fa ny fanjakana toa antsika tsy manana lanja ara-pivavahana.
Raha ny momba ny NFM dia tsy fantatro izay NFM tadiavinao (afa-tsy ny fanamasinana vehivavy). Zavatra roa samy hafa tanteraka ireo: ilaina izany ary sandany. Ahoana raha misy zavatra tsara na tsara? Zavatra roa samy hafa ihany ireo.
Ny tiako holazaina dia inona no dikan'ny soatoavina ara-pivavahana mihoatra ny famaritana napetrakao? Inona no tokony ho mahasamihafa ny mitzvah, na ny soatoavina ara-pivavahana, ary inona no manampy ahy amin'ny fisiany? Sa tsy azoko ny tenin'ny raby ary fanontaniana momba izany koa, satria io hevitra io dia tsy misy dikany mihoatra ny famaritana azy? Heveriko fa azo atao ny manazava ny maha samy hafa ny tsara sy ny tsara tarehy, na dia tsy amin'ny teny, ary ny NPM eo amin'izy ireo. (Ohab.: Heveriko fa tsy hahita olona hanolotra ny ainy ho an'ny hatsaran-tarehy aho, fa ho an'ny tsara eny, noho ny zava-misy fa tsy manana dikany ampy ny hatsaran-tarehy, farafaharatsiny raha ny hevitro).
post Scriptum. Ny fanjakana (araka ny fahazoako azy) dia raisinao ho zavatra manan-danja amin'ny firenena ihany, fa tsy manampy na dia amin'ny fitazonana mitzvos aza. (Na dia milaza aza ianao fa ny zavatra manampy amin’ny fitandremana ny didy dia tsy voatery ho raisina ho soatoavina ara-pivavahana.) Araka ny fomba fanaonao, nahoana no tena milaza fiderana? Ny antony mahatonga ny fiaiken-keloka momba ny famoronana izao tontolo izao dia mety ho na dia mahazo fisondrotana karama aza aho na mivoaka ny boky Harry Potter hafa, saingy tsy misy olona ara-dalàna hidera izany. Raha tena manana soatoavina nasionaly tokoa ny fanjakana, ary tsy manana rafitra fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra, dia izaho eo amin'ny toeranao dia tsy hihevitra izany ho fiderana tsara. Ny raby dia ho afaka hanazava ny heviny ary aiza ny sisintany?
Misaotra, mifona ary mirary taona vaovao.
Sarotra amiko ny manao dinika amin'ny elanelam-potoana toy izany.
Tsy misy zavatra manan-danja ara-pivavahana tonga amin'ny vanim-potoan'ny mitzva. Mifanohitra amin'izany, ny mitzvah dia ohatra amin'ny zavatra manan-danja ara-pivavahana. Saingy na dia eo amin'ny fampiharana ara-moraly aza dia misy lanjany sy dikany ara-pivavahana (ostrich satria fahatanterahan'ny sitrapon'Andriamanitra izany). Mifanohitra amin'izany, ny fanatanterahana ny filan'ny tsy fahalalana dia tsy misy lanjany ara-moraly na ara-pivavahana. Ny olona iray dia maniry firenena tahaka ny tiany sakafo maraina na trano. Fahatanterahan’ny filana izany fa tsy sandany. Rehefa tanteraka ny filana lehibe eo amin'ny fiainanao (toy ny famonjena ny ainao) dia antony lehibe tokony hitenenana fiderana izany. Tsy hitako izay tsy azo eto sy izay tokony hazavaina.
Avelan'ny fanjakana hohajaina ve ny soatoavina ara-pivavahana? angamba eny. Ny sakafo maraina sy ny karama anefa dia mamela izany.
29 Elul 09 - 2016/15/03 amin'ny XNUMX:XNUMX
Taorian'ny fifanakalozan-kevitra teo ambony dia te-hametraka fanontaniana maromaro aho izay apetraka amiko araka ny hevitro na avy amin'ny lahatsoratra na avy amin'ny fifanakalozan-kevitra izay nivezivezy tamin'izany.
A. Raha ny fahazoako azy dia tsy mino ny fitsinjaram-pahefana ny Andriamaniny raha ny hevitry ny fidiran'ny Mpamorona sy ny famoronana "fahagagana" toy ny fanjakan'Israely, ny fanakambanana ny sesitany, sns, indrindra fa ny "fahagagana" kely "mitranga" ho an'ny olona iray toy ny "vola" latsaka avy amin'ny toerana tsy nampoizina
Nanontany aho, [araka ny lohahevitra iray matetika atolotrao], momba ny evolisiona nosoratanao fa ny tsy mino an'Andriamanitra dia mijery ny evolisiona ao anatin'ny lalàna raha mijoro ianao ary mijery ny lalàna ivelan'ny lalàna ary manontany hoe 'iza no namorona ireo lalàna ireo', ary rehefa hitanao izany lalàna izany. dia naorina tamin'izany fomba izany dia mitondra any amin'ny famoronana, ianao dia manatsoaka hevitra fa Andriamanitra no namorona ny lalàna tamin'izany fomba izany, izany hoe Andriamanitra no namorona ny 'lalàn'ny evolisiona'. Raha izany no izy, na dia mikasika ny fahagagana aza, dia marina tokoa fa amin'ny fomba fijery 'tsy misy dikany' sy tsotra dia toa voajanahary ny zava-drehetra, ary ny fandehan'ny zanak'Israely hatramin'ny taranaka fara mandimby dia manana fanazavana voajanahary, toy ny fananganana ny Fanjakan'Israely, fa raha mijery any ivelany isika ka manontany Mitovy amin'ny naminanian'ny mpaminany sy ny Torah, dia mety ho azo lazaina fa ny Mpamorona no nanomana sy nitarika an'io dingana 'voajanahary' manontolo io tamin'ny tanjona, ary mijery ivelan'ny dingana sy ny lalàna voajanahary ao anatiny. izany, afaka manome sarin'ny fitsimbinana? [Na dia mikasika ny fahagagana kely kokoa aza dia azo raisina io zoro fijery io].
B. Fanontaniana hafa, midika ve izany fa tsy mino ny fahagagana voasoratra ao amin'ny Torah sy ny Mpaminany ianao, ary hita amin'ny fomba fijery ivelany fa mandà ny lalàn'ny fizika toy ny hoe: tehina tonga bibilava, mofo midina avy any an-danitra. , rano mivadika ra, kalesy misy soavaly miakatra amin’ny tafio-drivotra, ary maro ny mpisorona, toy ny fitambaran’ny angano?
fahatelo. Fanampin'izay, inona no ambaran'ity finoanao ny fahalalanao an'Andriamanitra momba ny asan'ny olombelona ity, amin'ny ankapobeny dia toa tsy manafoana ny fahafantarana an'Andriamanitra ny tsy fisian'ny fanaraha-maso, fa toa lalina tokoa no misy idiran'ireo finoana ireo amin'ny tsirairay, sns. Ny hevitra momba ny 'valisoa sy sazy' amin'ny fomba fanaonao dia tsy misy, ka ny teninao dia midika fa 'izao tontolo izao' dia finoana feno fahendrena izay tsy manohana ny Torah [tena manaiky aho, fa ny mpaminany sy ny soratra masina dia manana be dia be. fanohanana mazava], ny tsy finoana an'io fitsipika io, dia ny mamerina ny tenin'i Leibowitz hoe, fa ny 'fiampangana' rehetra ho an'ny mitzvah dia ny hoe satria nanao izany aho, midika ve izany fa ianao? Raha izany no izy dia manantena aho fa mazava aminao fa tsy maro no hisalasala hiditra amin'ity fivavahana ity, nahoana no mametraka ny tenako ao anatin'ny rafitry ny lalàna efa lany andro sy efa lany andro [miaiky koa ianao fa maro ny didy sy didy no manafoana ny tsirony mandritra ny taona sy ny taona] nahoana no tsy ' manaiky 'ampahany ihany amin'io rafi-dalàna io, ianao ihany ry Relevan, inona no tsy mety amin'ny lalàn'ny Fanjakan'Israely?Nahoana no mavesatra loatra ny efa misy?
D. Toa avy amin'ny zavatra lazainao fa mino ny foto-kevitry ny 'Torah avy any an-danitra' ianao [ao anatin'ny fetra iray hatramin'ny fahafantarako fa manaiky ny sasany amin'ireo fanambaran'ny mpitsikera ny Baiboly ianao], ary raha tsy izany dia tsy maintsy mino ny foto-kevitry ny 'faminaniana'. Ary nanontany aho hoe, maninona koa eto no tsy hampiasa lojika mitovy [mitovitovy ihany koa raha ny hevitro ny filazana], fa izay rehetra tsy hitako dia tsy misy antony hiheverana fa misy izany, izany hoe efa ho 2500 taona izay tsy nisy nahita. faminaniana inona izany ary ahoana no tokony hanehoany izany, ary mino ianao Miorina amin'ny faminaniana tsy matotra izay nisy taloha [faminaniana tamin'ny lasa dia toy izao manaraka izao: manao ny tsara ho tsara, manaova ratsy ho ratsy, ny dingana rehetra izay tonga taty aoriana dia atao. aza miala amin'ny lalan'ny natiora], koa nahoana raha mihevitra tsotra izao fa tsy misy izany faminaniana izany ary sain-tsain'ny olona tany amin'ny tontolo fahiny ary toy ny tsy misy ankehitriny dia tsy nisy izany taloha, ary tahaka ny antsika. indray mandeha sary an-tsaina fa misy fanahy sy demonia sy ody sy zodiac famantarana sy ny angano tsara tarehy hafa, alaivo sary an-tsaina fa misy faminaniana, amin'ny ankapobeny dia mitaky ny filazanao amin'ny teninao aho, tsy manana antony hinoako ny faminaniana raha a. Tsy hitako izay misy ankehitriny. B. Afaka manazava ny faminaniana rehetra araka ny natiora aho. fahatelo. Manana fototra marim-pototra aho hinoana fa tsy nanana fanavahana tsara ny olona taloha ary namorona izy ireo fa naminany na naka sary an-tsaina izany.
A. Voalohany, tsy haiko hoe inona no inoan'ny havako na tsy inoako, akaiky kokoa ny zavatra inoako (na tsia). Raha ny zavatra inoako, dia tsy manana famantarana aho fa misy fahagagana mitranga eto amin'izao tontolo izao. Misy angamba fa tsy hitako. Tsy mitovy amin'ny hevitro momba ny evolisiona izany satria misy hevitra manery ny fisian'ny tanana (mpamorona), fa eto dia mety ho azo.
Ankoatra izany, ny fahagagana dia faritana ho fitsabahan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, izany hoe fiovana amin'ny fomba mahazatra. Hoy i Hoy fa ny fihetsika araka ny lalàna dia tokony ho X ary novain'Andriamanitra ho Y. Raha mbola manana fanazavana voajanahary momba ny zava-mitranga aho dia tsy hitako izay antony hiheverana fa misy ny fitsabahana. Ary raha olona iray no miteraka ny fitondran-tena voajanahary, dia izany no resahiko. Izany no famoronana ny lalàna.
B. Ao amin'ny bokiko aho dia hanazava amin'ny antsipiriany ny famariparitana momba ny supernatural amin'ny loharano samihafa. Amin'ny ankapobeny dia azo inoana fa Andriamanitra taloha no niditra an-tsehatra bebe kokoa (dia nisy fahagagana ary nisy faminaniana). Ankehitriny aho dia tsy mahita famantarana ny amin’ny fandraisan’Andriamanitra an’izany.
fahatelo. Tsy azoko teto. Ahoana ny amin'ny tsy fisian'ny fandraisana anjara amin'ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso? Misy ny fanaraha-maso tsy an-kiato ny ataon'ny olombelona fa tsy misy fitsabahana (farafaharatsiny tsy matetika).
Ny fanoloran-tena amin'ny Torah sy ny mitzvah dia tsy miankina amin'ny valisoa sy sazy fa amin'ny adidy hanao izay didin'Andriamanitra. Maimonides dia efa nanoratra tao amin'ny fanehoan-keviny momba ny fanantenan'ny mpiasa hahazo valisoa sy tahotra sazy. Angamba izany no antony namoronana ireo finoana momba ny UAV ireo. Ary angamba tena izy ireo, saingy tsy fantatro.
Ny fanontaniana momba ny naoty, iza no hiditra ary iza no tsy hiditra, dia tsy misy dikany amin'ny resaka fahamarinana. Ny fanontaniana dia hoe marina ve aho fa tsy hoe ho malaza ve aho. Toheriko ny lainga masina (milaza lainga mba hamatotra olona bebe kokoa amin'ny asan'Andriamanitra). Raha noho ny fanoharana momba ny elefanta Maimonides ihany. Ireo izay manatevin-daharana ny asa dia manao izany noho ny fahadisoan-kevitra, ka miasa ho an’Andriamanitra diso izy ireo, ary tsy dia misy vidiny firy ny fikambanany.
Inona no ifandraisan’ny lalàn’ny Fanjakan’i Israely? Ary izay mitandrina izany dia miala amin'ny adidiny ara-pivavahana? Nahoana no tsy niresaka momba ny fitsipiky ny FIFA (Association Football) ianao?
D. Hazavaina ao amin'ny bokiko koa izany. Ny sasany amin'izany dia resahina ao amin'ny boky marina sy tsy miorina (amin'ny tohan-kevitry ny vavolombelona iray andro). Eto aho dia hanazava fohifohy. Na dia mitovy foana aza ny lalàn'ny natiora, dia miova ny olombelona. Ary izay noheverin'izy ireo taloha no eritreretiny ankehitriny? Ary inona no nataon'izy ireo androany? Inona no nataon'izy ireo indray mandeha androany? Nahoana àry no heverinao fa tsy miova ny fitondran-tenan’Andriamanitra? Raha tsy maintsy manapa-kevitra aho dia aleoko mampitaha azy amin'ny olombelona fa tsy amin'ny natiora tsy misy aina. Tsy misy antony tokony hiheverana fa hitovy ny fitondrantenany foana. Koa raha nanapa-kevitra ny handao tsikelikely an'izao tontolo izao izy, dia tsy hitako ho zavatra hafahafa na tsy takatry ny saina izany. Mifanohitra amin'izany, manana petra-kevitra aho hoe nahoana no mitranga izany. Toy ny zaza izay rehefa lehibe dia mamela azy irery ny rainy ary mihazakazaka mahaleo tena. Toy izany koa ny fihetsik’Andriamanitra amintsika. Tsy ny fitotongan’ny taranaka araka ny mahazatra antsika no nialany, fa ny fiakaran’ny taranaka (mature). Ankehitriny dia efa azontsika tsara fa misy ny mpitondra ho an’ny renivohitra na dia tsy misy fahagagana aza. Tena mahay filôzôfia isika ka mahatakatra fa ny tontolo iray fehezin’ny lalàna raikitra dia manaporofo lavitra kokoa ny amin’ny Mpamorona iray noho ny tontolo iray mivadika. Ka tsy mila fahagagana intsony ianao izao. Farafaharatsiny raha toa ka nitondra sy nieritreritra toy ny olon-dehibe isika, araka ny nantenaina tamintsika. Misy tokoa ny hafa manana fisainana zaza, fa avy amin'izy ireo angamba no antenaina ho lehibe.
Taorian'io valin-teny io dia nilaza ianao fa "azo antoka fa Andriamanitra no nisalovana bebe kokoa taloha." Fa misy andininy ao amin'ny Torah milaza ny fidiran'ny taranaka fara mandimby (ary nanome ranonorana tamin'ny taninareo tamin'ny fotoany Aho, ary nanome ny orananareo tamin'ny fotoany, sns.). Ahoana no ilazana fa Andriamanitra (izay toa nahalala fa hanapaka ny fifandraisana amin'ny fotoana iray izy) dia nanoratra fampanantenana "hamaly soa" izay efa nikasa ny hampitsahatra ny fanatanterahana azy? Raha misy ray aman-dreny mampanantena vatomamy zanany ho takalon'ny fitondran-tena tsara, na dia lehibe aza ny zaza, dia andrasana ny ray aman-dreny hitandrina ny fampanantenany, sa tsy izany? Ary raha te hampitsahatra ny firaisana ara-nofo izy, fara faharatsiny, tokony hazavainy ny antony (nihalehibe izahay, sns.).
Ao amin'ny Torah koa dia momba ny mpaminany sy ny faminaniana ary ny fahagagana, ary ireny koa dia nanjavona. Nanjavona koa ny tempoly sy ny sorona. Toy izany koa ny fanandevozana ary mihamaro hatrany. Hitantsika fa indraindray ny Torah dia miresaka amin'ny olona tamin'ny fotoana nanomezana ny Torah, ary misy fiovana izay tsy resahin'ny Torah. Afaka maminavina ny antony, fa ireo no zava-misy.
Raha ny momba ny mpaminany, ny faminaniana, ny fahagagana, ny tempoly, ny sorona, ny fanandevozana, sns, dia zavatra tsy misy fampanantenana haharitra hatramin’ny taranaka fara mandimby. Misy ihany ny ohatra izay nitranga tamin'ny fotoana iray, fa nahoana isika no manantena fa ho avy koa izy ireo? Fa momba ny valisoa sy ny sazy, dia nanoratra mazava tao amin'ny Torah i Gd fa misy ifandraisany amin'ny taranaka fara mandimby ny fitandremana ny mitzvos sy ny valisoa sasany, noho izany dia manana antony marim-pototra aho hanantena fa hisy io fifandraisana io amin'ny ho avy, ary raha manatsoaka hevitra isika fa izany no izy. tsy misy dia fanontaniana mafy momba ny fahamarinana Torah, sa tsy izany? Ny hany fanazavana azoko eritreretina ho an'ity fanontaniana ity dia ny filazana toy ny hoe: "Tamin'ny mitzvah ao amin'ny nosy Alma Likha" ary avy eo dia tsy maintsy hongotantsika ny andinin-teny toy ny hoe "Ary nomeko ny orananareo amin'ny fotoany" ary hametraka azy ireo ho fanoharana momba ny karama any amin’ny tontolo manaraka. Mbola sarotra anefa izany, satria tsy misy Baiboly tsotra loatra.
Tsy azoko. Misy didy maromaro ny momba ny faminaniana. Tsy tokony ho hatramin'ny taranaka fara mandimby ve ny mitzvos? Anisan’ny asan’Andriamanitra ny fihainoana ny Mpaminany sy ny fitarihany ara-panahy ho antsika. Tsy tranga iray izay nananantsika mpaminany izany. Izany no nampanantenain’ny Torah ary nandidy azy mihitsy aza mba hanandrana sy handre ny feony. Ny mpaminany koa dia anisan’ny fomba fiasan’ny ady.
Ny fampanantenana fa raha mitandrina ny didy isika dia homena orana, dia adika ho toy ny fampanantenana mifandray amin'ny vanim-potoana izay iankinan'ny orana amin'Andriamanitra. Rehefa miankina aminy izany dia omena manaraka fitandremana. Izao izy dia nanapa-kevitra ny hanome izany ho antsika satria efa lehibe isika, ary mazava ho azy fa manomboka izao dia tsy misy dikany izany. Hazavainy amintsika tsotra izao ny politikany: rehefa manome zavatra aho dia ho fitandremana ny didy.
Ny amin’ny mpaminany kosa dia voasoratra ao amin’ny bokin’ny Deoteronomia hoe: “Fa hisy mpaminany hiseho eo aminareo”, tsy misy fampanantenana momba ny famerenana amin’ny laoniny eto. Izany hoe, ny didy rehetra mifandraika amin'ny fandinihana ny mpaminany dia didy misy - raha mpaminany no tiana hapetraka, dia izay tokoa. Toy ny hoe manao akanjo misy elatra efatra ianao dia tsy maintsy asiana somotraviavy. Tsy mijoro mihitsy ny mitzva, fa tsy ho azo iainana foana. Fa ny mampiavaka ny andininy miresaka valisoa sy sazy dia misy ifandraisany raha manao A isika - dia hanao B Andriamanitra. Ny fifandraisana mihitsy dia tsy misy fepetra amin'ny toe-javatra rehetra. Toa misy foana ny fifandraisana. Raha vao tonga amin'ny fehin-kevitra fa tsy misy io fifandraisana io dia toa misy fifanoherana amin'ny Torah eto. Azonao atao ny miady hevitra fa tsy ny filazana rehetra misy ao amin'ny Torah dia voatery ho marina mandritra ny taranaka maro. Voatery anefa izy hilaza fa mety hiova koa ny didy.
Fa maninona no tsy lazaina fotsiny fa na dia tsy hita amin'ny zava-misy aza io fifandraisana io, fa misy amin'ny fomba miafina ( afeno tarehy )?
Nitondra ny andininy miresaka mpaminany sandoka ianao. Rehefa dinihina tokoa, ny andininy miresaka momba ny mpaminany (Deoteronomia):
Mpitondra teny Mkrbc Mahic Cmni Ikim aminao Ikok Andriamanitrao andriamanibavy Tsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok Andriamanitrao Bhrb dia miala amin'ny Hkhl, tsy miteny hoe Asf Lsma At Cole Ikok Alhi sy At brigade Hgdlh Hzat tsy Arah indray, ary La Amot: ary hoy Ikok andriamanibavy Hitibo Asr Dbro: mpitondra tenin'i Akim Lhm Mkrb Ahihm Ary Angamba Neuvena: Ary ny Nosy Jeneraly, Andriamanitra dia tsy mampaninona ny wheragram: " Ny Nosy Shavua Jacka
Raha ny marina, ny famaritana marina dia tsy mitzvah misy fa mitzvah positive conditional (toy ny tassel). Saika misy fepetra avokoa ny mitzvah tsara rehetra. Ny mitzvah misy dia mitzvah tsy azo foanana fa tazomina fotsiny. Ireo mitzvos ireo dia azo esorina (raha misy ny toe-javatra - mitafy akanjo sy elatra, ary aza manao ny mitzvah).
Raha ny fanontaniana farany dia azo lazaina mazava ho azy fa miditra an-tsehatra foana Andriamanitra fa rehefa dinihintsika dia mirohotra any an-davaka izy hanakorontana antsika. Toa tsy azo inoana izany amiko. Isaky ny mijery ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao aho dia manana fanazavana voajanahary sy mahazatra. Ny lalàn'ny natiora dia miasa, ary rehefa mitsapa azy ireo ao amin'ny laboratoara ianao, dia andrasana hitranga ny zava-mitranga. Tsy misy antony hiheverana fa misy lalao afenina hafahafa toy izany eto. Tsy porofo izany fa fandinihana saina. Rehefa mahita vatana mihetsiketsika aho dia ny heveriko dia ny hery miasa ao aminy fa tsy hoe Andriamanitra no nanapa-kevitra ny hamindra azy tsy misy hery. Ambonin'izany, heveriko koa fa misy vatana mihetsika tsy misy hery. Io no foto-kevitra siantifika ekena ary toa mitombina sy miasa amiko.
Tsy milaza koa ireo andininy ireo hoe rahoviana no hiorina ny mpaminany, na impiry. Amin'ny ankapobeny, ny filazana toy ny hoe: Andriamanitra dia hanao X dia tsy azo lavina (satria tsy nisy fe-potoana voafaritra ho an'ny fitakiana). Fa ny filazan'ny karazana: Raha mitranga ny X dia hataon'Andriamanitra ny Y dia samy azo lavina satria mitranga ny X ary azo refesina ny Y. Noho izany dia misy safidy telo hamahana ny hevitra faharoa. Na koa hoe tsy tena nisy ny X. Na lazao fa Y tsy azo refesina. Na ny filazana fa nolavina ilay fitakiana. Fa raha lavina kosa dia tsy fanontaniana tsotra ny amin'ny fahamarinan'ny filazana ao amin'ny Torah amin'ny ankapobeny.
Tsy misy na inona na inona azo lavina eto amin'ny lafiny siantifika. Firy ny didy tsy maintsy atao vao milatsaka ny orana? Firy ny olona tokony hanao ireo didy ireo? Firy ny orana ho avy, ary hafiriana no tokony hilatsaka? Izany dia azo lavina tahaka ny momba ny Mpaminany.
Araka ny efa nosoratako, ny tsapako fa tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra dia tsy vokatry ny fandavana ara-tsiansa, fa vokatry ny fahatsapana ankapobeny (toa tsy mitsabaka). Ny zava-misy dia amin'izao toe-javatra misy antsika izao dia milaza aho fa tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra ary maro ny mpino no mihevitra izany. Mihevitra izy ireo fa rehefa manao mitzvos dia avy ny orana ary heveriko fa tsy misy ifandraisany. Hitan'ny masonao fa ny zava-misy marina dia tsy tena fanamafisana na fanoherana na inona na inona eto.
Azoko tsara fa tsy azo lavina ara-tsiansa izany, fa na ny fahatsapana ankapobeny aza dia ampy ho azoko averina (fa tsy amin'ny dikan'ny teny lojika-matematika).
Ny maha-samihafa ny raharahan'ny Mpaminany sy ny orana dia ny fifandraisan'ny didy sy ny valisoa (amin'ny heviny mahazatra) dia tokony ho eo no ho eo. Izany hoe, raha manao araka ny didy ny vahoakan’Israely, dia misy dikany ny valin-tenin’Andriamanitra fa ho tonga ao anatin’ny fe-potoana mety izy ireo (milaza ao anatin’ny volana vitsivitsy fa tsy aorian’ny 700 taona). Fa ny momba ny Mpaminany dia tsy misy fandrarana an'Andriamanitra mandefa Mpaminany iray indray mandeha ao anatin'ny 3000 taona. Tsy misy "potoana raisonable" eto ka azo eritreretina.
Ny tiako ho takatra dia ny fomba hampifanoheranao ny fifanoherana eo amin'ny fiheveranao sy ny hafatra mazava mivoaka avy amin'ireo andininy. Nanoratra valiny toy izao ianao teo aloha: "Hazavainy amintsika tsotra izao ny politikany: rehefa manome zavatra aho dia ho fitandremana ny mitzvos." Afaka manaiky izany fanazavana izany aho. Saingy na araka ny hevitrao aza dia sarotra ny manambara izany politika izany raha tsy mampihatra izany izy?
Izy no manatanteraka izany. Ho an'izao tontolo izao rehefa manome zavatra Izy dia manaraka didy. Amin'izao fotoana izao dia tsy manome izy, taloha no nanome. Amin'izao fotoana izao dia tsy naniraka mpaminany taloha Izy. Politika efa niova io (tsy ny fifandraisan'ny fanomezana sy ny vavaka fa ny fanomezana ny tenany).
Ary ankoatra izany, araka ny nanoratako taminao, Fook Hezi fa amin'izao zava-misy izao dia nipoitra ny adihevitra momba ny hoe mirotsaka an-tsehatra izy na tsia. Noho izany dia tsy misy afaka milaza fa ny zava-misy dia mampiseho fitsabahana, eny fa na dia noho ny fahatsapana sy ny fahatsapan-tena aza. Ka na inona na inona amiko dia azonao atao ny manontany hoe inona no tanjon'ity fanambarana ity. Angamba fanambarana ankapobeny izay tsy tokony hodinihina ara-tsiansa, ary mampiseho ny maha-zava-dehibe ny mitzvos. Mbola misy ankehitriny ny maha zava-dehibe ny mitzvos. Miova ny zava-misy fa mandrakizay ny lesona.
29 Elul 09 - 2016/15/04 amin'ny XNUMX:XNUMX
Atombohy amin'i Mr Tsitsro fa tsy vaovao ny dikan'i Derech Eretz Kedma amin'ny Torah ary raha tsy izany dia misy karazana fikomiana fotsiny eto [Manana toetra aho ankoatra ny maha-andevo an'Andriamanitra]
Satria inona no tena zava-dehibe raha halakhic na politika ny fitsipika ankoatra ny fahatsapana fa ny lalàna ara-politika dia avy amin'ny lalàna [olombelona] nohazavaina ary mahasosotra sy mampalahelo fotsiny,
Raha ny amin'ny raben'i Ponivez dia halakhah io fanangonan-tsonia io, toy izany koa ny tsy fitenenany, mazava ho azy fa tsy nanao fiderana noho ny halakhah izy ary koa ny mpangataka dia tsy niteny noho ny antony mitovy amin'ny heviny,
Mazava ihany koa ny filazanao hoe Hillel satria izany no namaritana ny halakhah, satria tsy hilaza ianao raha tsy izany,
Momba ny famoahana ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso teo amin'ny Isiraely, nahoana izany no manampy ary ho an'iza,
“Vavaka tsy voavaly”, izany dia tsy maintsy tena akaiky ny hitondrana ny vahoakan’Israely hanakaiky kokoa ny Andriamaniny sy hampifandray azy ireo amin’ny Mpamorona azy.
Ary izany koa, avy aiza ianao?
Mitomany aho noho ny fihantsiana toy izany, lehilahy hendry ianao, lazao amiko ny zavatra niainanao mifanohitra,
Tsy miady hevitra amin'ny fihetseham-po aho. Ny tsirairay sy ny fihetseham-pony.
Na dia araka ny lazainao aza dia nandeha ny zava-drehetra (ary tsy marina izany), ny fanontaniana dia ny hoe inona no asehon'ity fitsipika ity. Tafiditra ao anatin’izany ireo vinavina ireo.
Manampy be dia be ho an'ireo izay mahatsapa fa miasa izy ireo ary noho izany dia miala amin'ny fomban-drazana manontolo ny famoahana ny tsy voakarakara. Nihaona tamin'izy ireo am-polony aho. Ireo izay mahazo ny votoaty ekena dia hanohy hanambany tena amin'ny hafatra mahazatra. Ny tsapako dia misy mila miresaka na dia ireo misaina mahitsy aza. Sehatra iray ihany koa tokony hojerena. Ny filazana fa tsy zava-dehibe ny marina fa ny fiahiana ny adala ao an-tanàna ihany, sy ny politikan’ny lainga masina tsy hamoahana ny marina, no mahatonga antsika ho very zanakalahy tsara indrindra ka hitoetra amin’izay mihinana an’ireo Lioka ireo. Izany no traikefako mifanohitra. Nanontany ianao, dia hoy aho.
Raha ny fifikitra amin'ireo loharano tranainy manohitra ny fahamarinana avy amin'ny tahotra toa anao, dia tsy manana afa-tsy ny mitondra ny Gemara ao amin'ny Yoma Set AB aho:
Damar Rabbi Yehoshua Ben-Levi: Nahoana izy io no antsoina hoe mpikambana ao amin'ny Knesset - izay namerina ny satroboninahitra tamin'ny voninahiny taloha. Ary hoy Ata Moshe tamin'ilay lehilahy lehibe sady mahatahotra, Ata Jeremia, nanao hoe: Ry vahiny avy any Karkrina ao an-tempoliny, Ry fahatahorana azy? Tsy niteny hoe mahatsiravina. Ata Daniela nanao hoe: Ny hafa firenena andevozin'ny zanany, Aya ny mahery fony? Tsy nilaza ny mahery fo. Tsy miaraka aminy izy ary hoy izy ireo: Fa ny herim-pon'ny herim-pony no maharesy ny saina, izay manome lava ny ratsy fanahy. Ary izao no zava-mahatahotra azy, dia ny hoe, raha tsy misy fahatahorana an'Ilay Sambatra, ahoana no hisian'ny firenena iray eo amin'ny jentilisa? Ary i Rabbanan Hichi dia andevoko ary lehibe indrindra amin'ny Teknat Datkin Moshe! Hoy Raby Elazara: Satria fantany ao amin'ny Sambatra fa marina izy, noho izany dia tsy nandainga taminy izy ireo.
Mirona hanamarina ny fanambarako aho fa tsy misintona azy ireo avy amin'ny loharano isan-karazany, Leibowitz (izay tsy mitovy hevitra amiko) na olon-kafa. Raha mahita fitoviana eo amin'izy ireo sy Leibowitz ianao dia ny fanapahan-kevitrao, fa tsy misy ifandraisany amin'ny adihevitra mihitsy. Mampalahelo fa izay mitory mba hamolavola fomba fijery izao tontolo izao araka ny teny faneva ataon’ny hafa dia manome tsiny ny hafa amin’izany toe-tsaina izany. Ny fandroahana an'i Momo.
Raby Michael Shavuot Tov
Izany hoe, tsy heveriko fa ao anatin'ny sokajin'ny lainga masina ny fitsimbinana sy ny vavaka,
Ka nanontany anao aho hoe avy aiza ianao,
Ekena tanteraka fa manontany na misalasala ny amin'ny filazana ny marina ny olona [ary am-polony maro no tsy manamarina ny fampahafantarana mihitsy ary momba ny fanaraha-maso manokana sy ny vavaka indrindra indrindra fa ny ankamaroan'ny mpino dia mahatsapa ny maso mijery sy manara-maso manokana eo ambanin'ny tsirairay]
Tsy mieritreritra mihitsy aho fa ny fanaraha-maso manokana sy ny vavaka dia ampahany amin'ny fanontaniana mikasika ny filazana ny marina na ny tsy fisian'izany na ireo zavatra mitaky fanambarana,
A] satria tsy ilaina ny milaza fa izany no izy,
B] tsy mandray anjara amin'ny fomba rehetra,
C] Raha afaka manampy olona tsy manan-tsiny Andriamanitra nefa tsy manao izany, dia manome tsiny azy tokoa ianao noho ny tsy fijoroana amin’ny ran’ny mpiara-belona [marina fa tsy mpifanolobodirindrina aminy izy,] ara-pisainana.
Tsy maintsy manapa-kevitra ianao na amin'ny foto-kevitry ny raharaha ve ny filazanao, fa tsy marina ny zavatra lazaiko, na milaza ianao fa "lainga masina" no tokony handaingako mba tsy hanafintohina ny finoan'ny olona tsy manan-tsiny.
Tsy nanome tsiny an’Andriamanitra aho na inona na inona. Afaka namorona izao tontolo izao tsy ho tanterahin’ny lalàna izy fa nanapa-kevitra (ary angamba niara-nanandrana taminy) hanao izany araka ny lalàna. Na izany na tsy izany, heverinao ve fa tsy afaka nanampy tamin'ny Holocaust izy na tamin'ny loza hafa? Koa nahoana izy no tsy manampy? Nahoana no heverinao fa manome tsiny azy mihoatra noho ianao? Ary nohavaoziko fa mijaly ny olona eto amin'izao tontolo izao?
Fa ireo zavatra rehetra ireo dia hazavaina tsara ao amin'ny bokiko.
Nazava tsara aho,
Voalohany, tsy mbola nahita filazana toa anao aho fa tsy misy fanaraha-maso mihitsy,
Tsy heveriko koa fa lainga masina izany, raha izany tokoa no izy, nahoana raha avela ho toy izany,
Raha ny lalàna, ny fanomanana ny lalàna momba ny famoronana izay tsy niova izany hoe tsy mbola nisy fanaraha-maso, na lalàna misy daty?
Raha ny momba ny Holocaust sns, raha araka ny fitantarana ny zava-drehetra dia tsy haiko kaonty fa tsy hanohitra ny finoako mora sy tsy misy enta-mavesatra izany,
Raha tsy misy kaonty [manara-maso] miverina Kushia mankany Dukhta,
Manana tsirony angamba i Haftarah, okay ,,,
1. Noho izany?
2. Nohazavaiko hoe nahoana no tsy avela.
3. Ny lalàn'ny zavaboary, izay fony mbola tsy fantatra, dia navelan'Andriamanitra hivily hiala amin'izany bebe kokoa, ary amin'izao fotoana izao dia mahazatra kokoa izany, dia mety tsy manao izany izy.
4. Tsy nisy fanontaniana ary tsy nitaritarika na taiza na taiza izy. Raha heverinao fa ara-drariny daholo ny zava-mitranga (afa-tsy ny tsy azonao), dia inona no manasarotra ahy? Rehefa dinihina tokoa, na dia raha ny hevitro aza dia tsy voakarakara ny zava-drehetra, ny zava-mitranga dia ny zavatra tokony hitranga, ka inona no olana amin'Andriamanitra, araka ny hevitro? Raha ny marina, tsy misy olona mijaly mihoatra noho izay mendrika azy.
29 Elul 09 - 2016/15/07 amin'ny XNUMX:XNUMX
Salama Raby Michael
Noho izany, tsara angamba raha izany no izy, ny olana dia avy amin'ny Torah avy amin'ny mpaminany sy avy amin'ny Soratra Masina, ary ny fialan-tsiny fa tsy nisy afa-tsy olana lava tao amin'ny Talmoda dia mifanohitra amin'ilay raharaha, ny olan'ny fanofanana ao Chazal.
Nohazavaiko tsara ny antony eny avelao izy io,
Ny fanontaniana dia hoe, inona no dikan'ilay izy, "sao misy dikany hafa" sa lojika hafa?
Ny voalohany dia tsy mitombina, ny faharoa, raha tsy misy ifandraisany amin'ny valisoa sy sazy amin'ny lafiny rehetra [misy valisoa sy sazy ve?] Raha tsy misy kaonty [manara-maso] dia mety tsy izany, dia inona no tena tavela ..Miezaka aho maka sary an-tsaina hypothesis tsy misy fahombiazana,
Fiadanana Capricorn. Heveriko fa reraka isika.
29 Elul 09 - 2016/15/08 amin'ny XNUMX:XNUMX
Eto indrindra aho tsy nahatsiaro reraka,
Ary amin'ny faha-XNUMX dia ho faly aho noho ny valin'ity andalana nosoratako ity
Ny fanontaniana dia hoe, inona no dikan'ilay hoe "manana dikany hafa ve?"
Tsy azoko antoka hoe nahoana no resahina eto. Heveriko fa miresaka momba ny antony namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao mba hofehezin'ny lalàna. Afaka manoro hevitra iray aho, ohatra hoe tiany isika mba hahay hitodika amin'izao tontolo izao. Raha tsy atao ara-dalàna izany dia tsy ho afaka haminavina izay hitranga amin'ny toe-javatra rehetra ianao ary tsy ho velona.
Ny hafa rehetra nosoratanao dia tena tsy azoko. Fa azafady raha tsy misy zava-baovao marina dia ho tapitra eto isika. Efa fanaoko foana ny mamaly ny mailaka rehetra, saingy mila fotoana be amiko ity tranokala ity, ary ny ankamaroany dia famerimberenana ny zavatra nosoratana sy voalaza.
29 Elul 09 - 2016/15/09 amin'ny XNUMX:XNUMX
Toa misy fifanjevoana tokoa eo amin'ny mailaka eto satria tena tsy azoko mihitsy hoe nahoana no reraka ny haftarah rehefa tsy namerina ny tenako aho na dia indray mandeha aza,
Hampiakatra izay nosoratanao indray aho ary valio eto,
Nanoratra i Rabi Makal ,,,
1. Noho izany? [Mifandray amin'ny fahalalan'ny tsirairay izany]
2. Nohazavaiko hoe nahoana no tsy handao azy.[Mifandray amin'ny fanaraha-maso]
3. Ny lalàn'ny zavaboary, izay rehefa tsy fantatra dia navelan'Andriamanitra niala tamin'izany bebe kokoa, ary amin'izao fotoana izao dia mahazatra azy ireo, dia mety tsy manao izany izy.
hoy aho namaly,
1] Noho izany dia tsara angamba raha izany no izy, ny olana dia avy ao amin'ny Baiboly izay nosoratana mifanohitra amin'izany ary milaza fa adiny iray sy fifanoherana ihany no nisy olana lava tao amin'ny Talmud, ny olana momba ny fanofanana amin'ny ny olon-kendry dia tsy hijanona ho fanontaniana,
2] Efa nohazavaiko ary ho fintinina, tsy heveriko fa ny fanaraha-maso manokana sy ny vavaka dia anisan'ny fanontaniana sy vahaolana momba ny filazana ny marina na ny tsy fisiany amin'ireo am-polony lazainao fa tsapanao fa miasa indrindra rehefa tsy ilaina izany. lazao fa tena izany tokoa,
4] Nanoratra ianao fa mety manana hevitra i Gd amin'ny fanapahan-keviny tsy hijery ary tsy hanohitra ny fanontaniana momba ny andraikitra mihatra aminy izany,
Nanontany aho, raha zavatra tsy fantatsika ny tsirony, lojika hafa, toa tsy mitombina,
Raha zavatra tsy mahazatra ny tsirony nefa azo inoana fa tsy misy ifandraisany amin'ny valisoa sy sazy [ary raha tsy misy kajikajy sy fanaraha-maso dia mety tsy] tsy hitako ny lafiny iray eto,
Mamerina ny tenanao ianao.
1. Nolazaiko fa tsy maninona amiko ny tsy misy miteny toa ahy. Nahoana aho no tokony hanome fanazavana?
2. Ary nohazavaiko ny antony eny avelao izany. Nilaza aho fa nihaona tamin'ny olona maro izay ny vavaka sy ny fanaraha-maso no tena olana. Inona no nohavaozina teto?
3. Tsy fantatra ny siansa taloha ary tsy fantatry ny olona ny lalàn’ny natiora. Noho izany dia azo inoana kokoa sy voajanahary ny miala amin'izy ireo. Ankehitriny dia fantatsika izy ireo. Nihevitra, ohatra, izy ireo taloha fa avy ny orana noho ny didy. Ankehitriny dia fantatsika mialoha ny habetsahan'ny orana nilatsaka ary oviana, ary miankina amin'ny lalàn'ny meteorolojia izany fa tsy ny mitzvos.
4. Tsy azoko hoe taiza no nanoratako fa manana antony tsy hijerena Andriamanitra. Nanoratra aho fa tsy nijery izy. Ny tsirony? Angamba ny hoe efa lehibe isika ka tsy tokony homena tanana. Saingy na inona na inona teoria, ny fanontaniana tena izy dia mety hanara-maso tokoa ve izy? Raha ny hevitro - tsia.
Ary manoratra indray aho fa reraka isika.
Nanoratra i Rabi Makal
Saingy nanapa-kevitra izy (ary mety nanandrana niaraka taminy) hanao izany araka ny fitsipika.
Angamba ny hoe efa lehibe isika ka tsy tokony homena tanana.
Dia izay no valiny tsy mijoro ho an'ny namany ra ??zaza be ????
Raha izao no firehana dia efa reraka tokoa isika fa tsy mampiahiahy ahy ianareo amin'ny famoahana lalàna tsy misy fotony satria efa im-betsaka aho no voampanga teto,
Fiadanana Capricorn. Averinao indray ny zavatra efa noresahina hatramin'ny fototra.
Efa nohazavaiko taminao ny tsy fahampian'ny maraina ao amin'ny filazana hoe "tsy hijoro ianao" izay mitodika aminao ihany koa.
Tena tsy tiako izany, fa amiko dia vita izahay.
Salama Raby Michael,
Mahay mamaky teny eny anelanelan'ny tsipika ny Mpanjaka
Namaly aho hoe, manana karama sy penalty aho, ny fomba fitantanana ny kaonty dia tsy mahay,
Fa aza miditra an-tsehatra rehefa mandeha ra ianao fa ho faty, ??. ??
Raha nifarana ianao ,,,, dia ho an'ny fiainana,,
Moa ve ny raby tsy mahita ny fiverenan’ny vahoakan’ny Isiraely ho any amin’ny taniny taorian’ny sesitany roa arivo taona ary avy hatrany taorian’ny telo taona taorian’ny nifaranan’ny Fandripahana Tambabe ho fanavakavahana amin’ny zavaboary? Moa ve izany tsy tokony ho lazaina amin’ny fitondran’Andriamanitra?
Tena zava-nitranga tsy mahazatra eo amin’ny sehatra ara-tantara tokoa ny fiverenan’ny vahoakan’Israely teo amin’ny taniny, saingy zavatra sarotra ny tantara ary tsy misy fomba ahafantarana raha nisy fitsabahan’Andriamanitra teto. Amin'ny ankapobeny dia heveriko fa azo takarina tsara io dingana io na dia tsy mila fandraisana anjara aza. Mahita izany dingana izany ny olona tsy ara-pivavahana ary tsy manapaka ny finoany tsy mino an'Andriamanitra sy ny siansa.
Noho izany, ny fanatsoahan-kevitra avy amin'ny "fahagagana ara-tantara" dia zavatra tena mampidi-doza sy tsy maharesy lahatra. Mety tsy mitovy amin’ny fahagagana ara-batana izany.
Na dia mety hisy lanja aza ny hoe nilaza mialoha ny fiverenan’ny vahoaka tany amin’ny taniny ireo mpaminany, ary amin’izany heviny izany dia mety hisy toerana hijerena izany dingana izany ho famantarana ny fandraisan’Andriamanitra anjara. Tsy haiko. Ny fantatro ihany fa na dia tsy nisy aza izany dia saika tsy nisy olona nitadidy ny Baiboliny (ny ankamaroany dia nitaky ny andininy mifandraika amin'izany ary nanaisotra azy ireo tamin'ny fahatsoran'izy ireo), ka sarotra ho ahy ny milaza lanja ara-statistika avo dia avo. amin’ireo faminaniana ireo. Ny thesis tsy mahazaka ny fitsapan-kevi-diso koa dia tsy dia mampitolagaga loatra rehefa tanteraka (na izany aza, nisy ny faminaniana tsy tena tanteraka ary tsy nisy natahotra azy). Ankoatra izany, ireo faminaniana ireo dia nandray anjara tamin'ny dingana mihitsy (noho ny fiverenanay eto). Faminaniana mahafeno ny tena, ara-bakiteny.
29 Elul 09 - 2016/15/11 amin'ny XNUMX:XNUMX
Amiko dia tokony holazaina / soratana amin'ny teny hebreo ny Kikro. Ary koa, ny teny nalaina avy amin'ny anarany dia mifandray amin'ny Publius Trentius Ash.
Oh, tsy nieritreritra aho fa havoaka avy hatrany fa halefa any amin'ny tonian-dahatsoratra. Azonao atao ny mamafa ity fanehoan-kevitra ity sy ilay teo alohany.
Tonga amiko tokoa izany, saingy zara raha mamaly ny solosainako. Nankatoaviko àry ilay boky ary izao vao afaka nandefa ny valinteniko manokana aho. Izy dia:
Nahoana no mamafa? Hevitra roa tokony hianaran'ny mpamaky rehetra. Raha ny voalohany dia tsy azoko antoka. Cicero ny anarana amin’ny teny latinina, ary tsy hitako hoe nahoana no tokony hovana ny fanononana anarana iray. Raha misy olona atao hoe David any Etazonia, tokony hataoko hoe David amin'ny teny hebreo izy. Ataoko angamba fa tsy izany.
Ary tsy azoko mihitsy ny antony nandikana ny teny latinina C ho gidro hebreo (tahaka an'i Kaisara fa tsy i Kaisara tamin'ny voalohany).
Momba ny faharoa dia misaotra indrindra. Nandritra ny taona maro dia nihevitra aho fa mivadika. Tompondaka sy manam-pahalalana ianao izao raby.
Nalefako koa ny valinteninao fanindroany fa mba manana fotoana lojika fotsiny. Raha hitanao fa tonga teo amin'ilay tranokala ilay voalohany (izay noeritreretinao), dia tokony ho azonao fa ny faharoa dia mitovy. Araka ny voalaza dia nankatoaviko ny fampiakarana azy roa (izany no fomba nanamboarana ny logiciel fa tonga amiko ny zava-drehetra). Mankasitraka ny zavatra rehetra aho, afa-tsy ny zavatra tsy mendrika (izay tsy nisy BH nandritra izany).
Samy tao amin'ny patriarka isika (P. Property Torah, c):
Izay mianatra toko iray, na halaka iray, na andininy iray, na tantely iray, na taratasy iray aza, dia tokony hanaja azy, satria isika no nandidy an'i Davida, mpanjakan'ny Isiraely, izay tsy nianatra tamin'i Ahitofela, fa zavatra roa ihany, ary namaky ny raby lehibeny izahay ka nahalala. fa voalaza hoe Ary mahay fa tsy zavatra mora sy ara-pitaovana ary izay David Melech Yisrael izay tsy nianatra tamin'i Ahitofela fa zavatra roa ihany no mamaky an'i Raby Alufu sy ny olom-pantany izay mianatra amin'ny mpanoratra azy toko iray na halakhah iray na andininy iray na tantely iray aza. litera iray amin'ny iray ny halehiben'ny fanajana tokony hatao Ohabolana XNUMX: XNUMX + Hahazo voninahitra ny olon-kendry + Sem / Ohabolana / XNUMX Y + ary ny tsy manan-tsiny handova ny soa, fa tsy misy tsara afa-tsy ny Torah izay voalaza + Sema / Ohabolana. / XNUMXb
Ary koa ao amin'ny BM Lag AA:
Aoka Rabàna: Raby izay niteny - Raby izay nianatra fahendrena, fa tsy Raby izay nianatra Baiboly sy Mishnah, ny tenin'i Raby Meir. Hoy Raby Yehuda: Marina avokoa ny ankamaroan’ny fahendreny. Hoy Raby Yossi: Tsy nanazava ny masony akory Izy afa-tsy tamin'ny mishnah iray ihany - izany no rabyny. Hoy Raba: Toy ny raby entana, Dasburn Zohma Listron.
Ary mety ho an'ny mpianatra ve ny mamafa ny tenin'ny tompony sy ny tompondaka ary ny olom-pantany?
Misaotra betsaka amin'ny fiderana diso tafahoatra :). Angamba aho haka lesona ho ahy mba hisaorana ny raby kaontera am-polony. Misaotra indrindra tamin'ny lahateny sy boky navoakanao izay nanokatra varavarana ho ahy amin'ny sehatra maro, ary nampitombo ny fahalalako tamin'ny sehatra maro hafa. Hantsoiko hoe "ny porofon'ny sokola." 🙂), nanitatra ny fijeriko, ary indraindray namorona fialan-tsasatra ho an`ny fanahiko.
Ary noho izany indrindra dia tsy te "hampianatra an'i Halacha" amin'ny raby aho. Ary nanolo-kevitra ny hamafa aho, satria nihevitra aho fa ampy ny manitsy ny vatan'ilay lahatsoratra raha hitan'ny raby fa mety izany, ary tsy maninona ny fisehoan'ny fanehoan-kevitra. Ary koa, araka ny voalaza, dia nahatsapa ho tsy mahazo aina aho nanondro amin'ny borosy mihozongozona noho ny fahadisoana, raha tena fahadisoana izany.
Raha ny zava-misy, araka ny fahalalako azy, ny fanononana latinina dia cicero tokoa (amin'ny teny anglisy ankehitriny, angamba ny mpandinika no nanodinkodina azy). Ny fanontaniana avy amin'i David dia mametraka olana raha miresaka momba ny anarana izay fantatra fa nipoitra saingy nampiasain'ny kolontsaina samihafa, ary miteraka olana amin'ny fampiasana ny anarana ho toy ny filaharan'ny vaninteny na ho teny mampiasa ny zavatra koa amin'ny heviny. Saingy toa ahy fa ny anaram-bositra Chitsro, raha ekena tokoa izany ao amin'ny Isiraely, dia tsy manjaka, ary tsy mitondra fiampangana ara-kolontsaina toy izany ka tsy ho takatry ny olona ny fampiasana cicero na hanaisotra ny dikan'ny anarana. . Amiko ihany koa dia toa mihena ny fampiasana ny endrik'i Tsizro raha jerena ny fitsipiky ny fandikana teny ekena ankehitriny.
Ny amin'ny fialamboly lojika, amin'ny maha-olona iray izay, araka ny voalaza, dia tsy maintsy mankasitraka ihany koa amin'ny ampahany betsaka amin'ny fahalalako eo amin'ny sehatry ny lojika, manantena aho fa ampy ny nianarako mba tsy ho lavo amin'ny zavatra kely toy izany. Noheveriko fa havoaka ho azy ny valinteniko faharoa, saingy tsy fantatro ny fomba hafa hanehoana ny faniriako ho voafafa ny voalohany, afa-tsy ny valin-teniny, izay nilazako fa tsy mino aho fa natao ho an'ny mekanika izany. famoahana avy hatrany. Nihevitra aho fa amin'ny farany dia hisy olona matoky an'io hahita azy ireo, ary ny fangatahana famafana vao haingana.
Ary misaotra indrindra.
Fanaon’ny raiko efa nodimandry (izay nianatra teny latinina) fa Tszero (sy Kaisara) tany am-boalohany ilay fanononana. Eto koa dia raby tompondaka sady mahay. 🙂
21th of Shivat 02 - 2017/14/43 amin'ny XNUMX:XNUMX
Milaza ianao fa na dia azonao atao aza ny manatsoaka hevitra mivelatra kokoa avy amin'ny andian-dalàna, dia tsy voafehin'izany ianao.
Izaho koa dia manana (mbola mitana) an'io fomba fijery io, ary noho izany dia tsy mahatsiaro adidy amin'ny akon'ny ethnocentrism na ny chauvinism avy amin'ny Jodaisma (ankoatra izany, izaho - ary amin'ny lafiny iray dia mbola) mampihatra ny minimalism interpretative ary milaza fa misy. Tsy misy "fanambarana soatoavina" ao amin'ny halakhah. Tsy misy fanambarana mipoitra mihitsy - tsy misy olana na tsara; toerana somary mamakafaka).
Saingy vao haingana aho dia nanalefaka ary mazàna manaiky ireo fanambarana sarobidy izay mety misy amin'ny teoria (fandavana ny fampindramam-bola amin'ny zanabola, ny faniriana ho mpanjaka, ny fananganana ny Tempoly, ny faniriana hanaiky ny Jodaisma rehetra eto amin'izao tontolo izao), noho izany dia nanintona ny saiko ny olom-pantatro. amin'ny hoe Eritrereto hoe tian'Andriamanitra hanao zavatra ianao, na dia tsy nandidy an'izany mazava tsara aza Izy, nahoana no tsy manao izany ianao (izany hoe, zavatra roa no niova - 1. Fantatro fa nisy fanambarana sarobidy nipoitra tampoka 2. Resy lahatra aho. fa ny fanambarana avy amin'ny Shittin dia mamatotra).
Raha ny momba ahy ihany no fanontaniana, dia nanao marenina aho, fa ny rabyntsika dia efa nanamafy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny tenany manokana amin'ny Torah - ny adidy hihaino ny tenin'ny olon-kendry izay fantatra amin'ny hoe Izy "(rehefa amin'ny farany. Hasbra dia tombantombana amin’ny fanazavana ny sitrapon’Andriamanitra).
Izany hoe, rehefa niaiky aho fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zavatra mamatotra, dia niady hevitra aho fa ny sain'ny olon-kendry - farafaharatsiny amin'ny fitsipi-pitondran-tena (tsy amin'ny etika mazava ho azy, fa toy ny fivoriana ara-moraly) - dia zavatra mamatotra satria toy ny manam-pahaizana amin'ny fahatakarana ny Halacha sy ny fijoroana ny sitrapon'Andriamanitra.Amin'ny fotony, dia mety ho manam-pahaizana manokana amin'ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo (izany dia ao amin'ny literatiora momba ny tsiron'ny mitzvos ho an'ny Rishonima noho ny Tannaima sy Amoraima, izay toa tsy nanandrana nanatsoaka hevitra momba ny foto-pampianarana iray fa nahita fanambarana sarobidy toy izany sy izany koa).
Ary ankehitriny ny fanahiko amin'ny fanontaniako - manana fialan-tsiny ve ianao mba tsy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay naseho tamin'ny masonao tsy hitandrina ny Torah?
Raha azoko tsoahina ny fanambarana soatoavina avy amin'ny Torah dia azo antoka fa andrasana amiko izany. Izany no sitrapon'Andriamanitra na dia tsy tena Halacha aza.
Saingy ny fanambarana soatoavina avy amin'ny olon-kendry dia tsy mamatotra. Raha ny hevitro dia tsy manam-pahaizana ny olon-kendry (tsy araka ny nosoratanao). Ny fahefan’ny olon-kendry dia tsy avy amin’ny maha-marina azy, fa avy amin’ny nahazoantsika ny fahefany (jereo ny Ks. R.P.B. Misy antony marim-pototra amin'izany, saingy tsy noho izy ireo manam-pahaizana manokana. Ary ankehitriny dia ho takatrao fa nahazo ny fahefan'izy ireo momba ny resaka halakhic izahay fa tsy amin'ny resaka meta-halakhic na soatoavina. Raha toa ka nanapa-kevitra ny hampiditra izany amin'ny halakhah (toy ny fanerena amin'ny ambaratongan'ny sodomia sy ny toy izany) izy ireo dia tsy manery antsika. Mazava ho azy fa raha manaiky azy ireo isika dia hanao izany, fa raha tsy izany dia tsy ilaina izany. Ny mifanohitra amin'izany dia ilaina ny manao ny mifanohitra amin'izany satria manana sata mamatotra ny Hasbra.
Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny lohan'ny yeshivo izay nanorina zavatra fa avy amin'ny Gemara sy ny voalohany rehetra, ary ny zavatra dia efa tranainy. Na dia misy lesoka isan-karazany amin'izany koa aza, ary jereo ny lahatsoratra eto amin'ny tranokala ho fanazavana: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
Ary fitaovana fanampiny
25 Sivan 06 - 2019/15/38 amin'ny XNUMX:XNUMX
Momba ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo raby momba ny fametrahana andro fahatsiarovana ny Famonoana Tambabe - jereo ny lahatsoratr'i Rabbi Shmuel Katz, 'Fandravana sy Fahatsiarovana' sy 'Andro Fandripahana Voalohany', ary ny lahatsoratr'i Rabbi Yeshayahu Steinberger, Ny ratra alohan'ny fanasitranana. Izy telo ireo ao amin'ny tranokala 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', ary tao amin'ny valinteniko tamin'ireo lahatsoratra etsy ambony.
24 Kisleo 12 - 2019/12/23 amin'ny XNUMX:XNUMX
Hiala tsiny mialoha aho fa sambany namaky ny votoaty ato amin'ity tranokala ity aho ary tsy haiko raha efa nivoaka tao amin'ny lahatsoratra na tao amin'ny fanontanian'ny mpamaly teto ny fanontaniako na ny valin'izany.
1. Raha heverinao fa nitsahatra tsy nitsabaka tamin’ny zava-mitranga eto amin’ny tontolo misy antsika Andriamanitra, dia azonao atao ny manazava amin’ny fomba fohy ireo foto-kevitra fototra ao amin’ny Jodaisma toy ny hoe:
B. Valisoa sy Famaizana - Toa ahy i Maimonides (manoratra avy amin'ny fitadidiako aho fa tsy avy amin'ny famerenana ao amin'ny boky) milaza fa ny fandehan-javatra voajanaharin'izao tontolo izao dia vokatry ny fitondran-tena manokan'ny jiosy toy ny ary nomeko anao. orana ara-potoana, sns.
2. Heverinao ve fa lasa tsy ilaina ny mivavaka in-3 isan'andro satria tsy misy olona iresahana? Moa ve izay rehetra tavela dia vesatra halakhic foana angamba no tena antony hangatahanao ny filanao amin'ny olona afaka manome azy?
Azo atao ve ny manome an'i Rosh Hashanah izay mandalo eo anoloany ho zanak'i Merona ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao?
4. Mieritreritra ve ny voninahiny ary tsy mikasa ny hampitaha an'i Khu amin'ny filazana an'ireo izay nihevitra fa natory i Shiva? Sa nandao ny tontolony?
Raha toa ka efa noresahina tao amin'ny tranokala ny zava-drehetra dia faly aho hametraka fanondroana ireo toerana mifandraika raha tsy mamela anao haneho hevitra ny fotoananao.
24 Kisleo 12 - 2019/17/22 amin'ny XNUMX:XNUMX
Mametraka fanontaniana midadasika maro ianao ary sarotra ny mamaly eto. Ho hitanao ao amin’ny trilogy vaovao ny fampianarako rehetra momba an’ireo sy ny lohahevitra hafa, ary ao amin’ny boky faharoa (Tsy misy lehilahy manapaka ao amin’ny Fanahy). Ankoatra izany dia azonao atao koa ny mikaroka ny tranokala eto ary mahita references be dia be amin'ny tsirairay amin'ireo fanontaniana ireo.
Jiosy natao sesitany
Alarobia ao Tamoz 25 - 06/2020/15 amin'ny 19:XNUMX
1) Mikasika ny tsy fitovian'ny fitondran'i Maimonides sy ny toy izany dia tsy misy ifandraisany amin'ny meta-halakhah izany, fa ny famaritana ny halakhah dia atao amin'ny fomba iray saingy tsy voatery mifandray ny fanapahana azy (mety ho azo atao aza izany. nilaza fa tsy voatery mifandray).
Ohatra: " AR Acha Bar Hanina dia hita sy fantatra eo anatrehan'ilay nilaza sy izy izao tontolo izao fa tsy misy tahaka azy amin'ny taranak'i Rabbi Meir ka nahoana no tsy nanangana halakhah toa azy izay tsy tantin'ny namany hatramin'ny farany. amin'ny heviny fa milaza momba ny maloto madio izy ary mampiseho azy amin'ny endriny madio Hitantsika fa na dia fantatry ny olon-kendry aza fa ny raby hendry iray (ary angamba ny zony) dia tsy nanjaka tamin'ny halakhah tahaka azy.
Ao amin'io pejy io ihany koa (Eruvin XNUMX :) ny antony dia nomena fa nanome voninahitra an'i Halacha na dia teo aza ny zava-misy fa i Shabash dia mandranitra an'i Tapi ary noho ny fanetren-tenan'izy ireo izany ary toa tsy misy mihevitra fa ny fanetren-tena dia tsy maintsy mitondra hatrany amin'ny marina. fahamarinana (na dia imbetsaka aza ny zava-misy dia lasa maranitra sy mazava kokoa).
Raha ny hevitro dia mazava be fa ny mpandinika (tsy tahaka ireo mpanakorontana…) ny halakhah dia nandeha tamin'ny fomba mazava sy tsy miovaova, raha ny marina, nahita maromaro tamin'izy ireo izay matetika tsy nitondra toa azy ireo ary tamin'ny tranga vitsivitsy ihany no nitondrany. tahaka azy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy dikany ny filazana fa tsy manana firindrana meta-halakhic i Maimonides satria misy dikany ny didim-pitsarana amin'ny meta-halakhic.
2) Nanapa-kevitra ny raby noho ny antony iray fa ny fahagagana dia ny tsy fisian'ny fahafahana tsy misy fitsabahana. Avy aiza no ahazoanao io famaritana io?
Ny maha-hafahafa ny fiheverana toy izany dia ny hoe ho an'izay rehetra nitana Baiboly teny an-tanany dia mazava fa na dia teo aza ny fahagagana rehetra tao dia nanota fanavotana sy fikomiana izy ireo (araka ny voalazan'ny raby tamin'ny fotoana nisehoan'ny fahagagana) ary raha miteny isika hoe fahagagana. dia zavatra tsy mety hitranga avy eo dia nilaza izahay fa ireo taranaka rehetra ireo dia andiana adala (Don Ku ary izay an'aliny ankehitriny no mibebaka noho ny "fahagagana" nataon'i Baba sy charlatans ary mihoatra noho ireo izay misy mpivavaka tsy manota tahotra ny sazy izay tsy nahita azy ireo Ku zanak'i Ku zanak'i Ku izay tsy mpanota tamin'izany fotoana izany)
Heveriko fa ny fahagagana dia ambany noho ny statistika mety hitranga ary noho izany dia misy fisokafana ho an'ny mandà (na dia tamin'ny andron'ny mpaminany aza) hilaza fa voajanahary izany fa tsy mahagaga. Ary araka izany koa no ananantsika fahagagana amin'ny taranaka misy antsika. (Fantatro ny olana amin'io fitakiana io, satria hita fa miaraka amin'ny fandrosoan'ny siansa, ny zavatra noheverina ho fihaonambe taloha noho ny fiheverana fa malemy ankehitriny dia ho fantatsika fa vita. Saingy mbola misy zavatra maro - rehefa ny miverina any an-tanindrazany ny olona
3) Nanoratra ny raby hoe: “Tsy heveriko anefa fa efa lasa any amin’ny halalin’ny heviny izy ireo. Ny fikasan’ny raby dia ny hilaza fa Zionista laika izy, toa an’i Ben-Gurion.
Isaoranay ny raby tamin'ny nametrahany hatsikana sy hatsikana mijoro ho eo amin'ny teniny. Manalefaka ny famakiana izany….
(Tsy mino aho fa mino an'izany ianao).
Alarobia ao Tamoz 25 - 06/2020/15 amin'ny 28:XNUMX
Nanitatra ny zavatra rehetra nosoratanao teto amin'ny toerana samihafa aho.
1. Tsy tadidiko intsony izay nolazainy (tsy fanamiana). Fa mikasika ny fanapahan'ny Knesset, dia nanonona porofo aho indray mandeha fa tsy ny halakhah no marina foana fa manana ny hasin'ny fizakan-tena (manjaka araka ny fahazoako azy na dia tsy marina aza izany raha ny hevitro). Mikasika ny BS sy ny BH dia nizarazara ny momba izany ny mpandinika. R.I Karo ao amin'ny fitsipiky ny Gemara dia manazava fa ny fanetren-tenan'izy ireo dia mitarika azy ireo ho amin'ny fahamarinana (satria nandinika ny tenin'i B'Sh aloha izy ireo vao namolavola ny toerany manokana) dia nanitatra izany tamin'i Tuba aho tamin'ny andininy vitsivitsy.
2. Amin'ity dia nanitatra an'i Tuba aho ao amin'ny boky faharoa ao amin'ny trilogy (ary koa eto amin'ny tranokala amin'ny toerana maro). Tsy misy biby toy ny fahagagana ao anatin'ny zavaboary. Izay milaza izany dia very hevitra fotsiny.
3. Tsy mino fotsiny aho fa resy lahatra tanteraka. Ny raby avy any Ponivez dia Zionista laika tanteraka.
Ara-tsaina On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)